ဝိမုတ္တိရသ (The Flavour Of Liberation): 2012
ဓမ္မ အနှစ်သာရများ စုဝေးရာနေရာ
* သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ၊ * သဗ္ဗရသံ ဓမ္မရသော ဇိနာတိ။
နမတ္ထု ဗုဒ္ဓါနံ နမတ္ထု ဗောဓိယာ။ နမော ဝိမုတ္တာနံ၊ နမော ဝိမုတ္တိယာ။
ထိုဘုရားရှင်တို့ ၏ ဝိမုတ္တိငါးပါးအား ရှိခိုးပါ၏။
Vimuttirasa (The Flavour Of Liberation)
ဝိမုတ္တိရသ ဓမ္မရိပ်မြုံသို့ 
ဓမ္မစာပေများ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ရှုမျှဝေနိုင်ဖို့ 
မပြီးဆုံးသေးသော နေ့ ရက်များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း
Ashin Javana's Beautiful Site
SITAGUSTAR'S PLEASANT SITE
သူတော်ကောင်းတို့ ၏ အသံတော်
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များအသင်း
Ashin Saccanyana's Pleasant Site
SITAGUSTAR'S PLEASANT PALACE
၀ိမုတ္တိရသ (Dhamma Portal)
The Peace of Noble Truth Thantithitsar
ထ နောင်း ရိပ်
Only Middle Way
ကြုံရာ ဆုံရာ (မိုးသောက်)
Shwe Yee (Facebook)
Ashin Acara (Facebook)
Dhammaransi Knowledge Bank-
S. Gum Aung
ကြုံရာ ဆုံရာ (မိုးသောက်)
Dhamma Ganga Pali Institute
You are welcome to Cakyarwalar
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး
မွေ့လျော်ဖွယ်အားလုံးကို တရား၌ မွေ့လျှော်ခြင်းက အောင်နိုင်၏။
#ထ နောင်း ရိပ်
�မပြီးဆုံးသေးသော နေ့ ရက်များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း
Htar Htar Moe (Facebook)
Momo Aung (Facebook)
Myanmar Mudita Youth Group
Ukhin Crays (Facebook)
ှုHouse of Inward Journey
Dhamma Sukha Meditation Centre (Melbourne)
Live Dhamma Talks Broadcasting
Mogok Meditation Group (USA)
Sayagyi Goenka Vippassana Research Institute
Uanda Buddhist Centre
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ (New York Centre)
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားတော် ပြန့် ပွားရေး
မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ တိသရဏ၀ိဟာရ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း
ဦးမြင့်လွင် (သန့် -တည်-ပွား)
၀ိသုဒ္ဓါရုံ ဓမ္မရံသီ ၀ိဟာရ
စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန် ဆန်အိတ်လှူခြင်း နှင့် အခြားလိုအပ်သည်များ လှူဒါန်းခြင်းတို့ဖြင့် လစဉ် ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သီလရှင်နှင့် ကျောင်းသားများ အောင်မြင်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး အတွက် အနီးကပ်စာပြပေးမည့် ဆရာမ (၆) ဦးအား တစ်လလျှင် (၅) သောင်းကျပ်ဖြင့် ငှါးရမ်းပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ပညာရေးအလှူအား စေတနာရှင်များမှလည်း ပါဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေများအား ဘဏ်စာအုပ်ထားရှိ၍ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအား လစဉ်ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မှတ်တမ်းများအား အလှူရှင်များထံသို့လည်း ပေးပို့သွားပါမည်။
ရန်ကုန်မြို့ အသောကာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်မှ နဝမတန်း ဖြေဆိုမည့် သီလရှင် ဆရာလေးများအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမများ လစဉ် ထားပေးနိုင်ရန် ပညာရေးအလှူရှင်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ရွှေစေတီ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းတွင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ၉ တန်းနှင့် ၁၀ တန်း ကျောင်းသားများ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား နေထိုင်ပညာဆည်းပူးနိုင်ရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မည့် ကုသိုလ်ရှင်များ လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ စေတနာရှင် အလှူရှင်များ အနေဖြင့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များအသင်း http://www.mmtheravada.org ဖုန်း
09-73062811, 09-5505176 သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကြစေလိုပါသည်။
သီလရှင် ဆရာလေးများနှင့် ကလေးများ ဇွန်လအမီ ကျောင်းတက်နိုင်ရေးအတွက် ကာလဒါန ကုသိုလ်အဖြစ် သဒ္ဓါတတ်အား နည်းများမဆို လှူဒါန်းကူညီကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:12 AM , Links to this post ,0comments
Labels: ပန်းကမ္ဘာ (အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:09 AM , Links to this post ,0comments
Labels: ၀ိမုတ္တိသုခ, Dhamma (Audio)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:07 AM , Links to this post ,0comments
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:08 PM , Links to this post ,0comments
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:05 PM , Links to this post ,0comments
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:00 PM , Links to this post ,0comments
မေတ္တာ ၊ ဓမ္မ သာသနာ့အလင်းရောင်တို့၏ အေးမြသောဆွဲငင်အား - မြသန်းစံ
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:56 PM , Links to this post ,0comments
ရှိတဲ့ အတိုင်းလည်းသိဖို့ သိတဲ့ အတိုင်းလည်ရှိနေဖို့ - မြသန်းစံ
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:44 PM , Links to this post ,0comments
Posted by မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များ at 10:21
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:44 PM , Links to this post ,0comments
Labels: Myanmar Mudita Youth Group
Statement of S Gum Aung by Ps U ZawMin (MCA Thailand)
ဆရာနည်းနည်းကြေငြာစရာလေးရှိတယ်လို့... ဤပလ္လင်က ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်... ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးစကားပြောကြရအောင်လို့... အေမင်...
ဘုရားသခင် ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးစကားပြောကြရအောင်လို့... တခါတလေမှာ ဒီပလ္လင်ကိုသုံးပြီးတော့မှ
ပြောတာမှားတဲ့အတွက်ကြောင့် မြောက်မြားစွာသောသူတွေ ခက်ခဲ့မှုတွေရောက်တတ်တယ်...
S.Gum Aung ကိစ္စ
ဆရာဒီနေ့ဘာပြောချင်သလဲဆိုတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၅ ရက်နေ့တုန်းက S.Gum Aung နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ နည်းနည်းလေး ပြောပြချင်တယ်... ဒီမှာရှိတဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားတွေကော ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မှာကြည့်ပြီး ခွန်အားယူတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေအယောက်တိုင်းကို စကားပြောချင်တယ်... ဒီဆရာရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေ ဒီတစ်ခါ သက်သေခံချက်ပေါ့ သွန်သင်ချက်မပါပါဘူး... သူသက်သေခံသွားတဲ့ အရာပေါ်မှာ အားလုံးခွန်အားရပြီးတော့မှ အကြီးအကျယ် ၀မ်းမြောက်ကြတယ်... စိတ်လှုပ်ရှားကြတယ်... တကယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တယ်လို့ ခံယူမိခဲ့ကြတယ်... သို့သော် MCA အသင်းတော်က အသင်းတော်တပါးတည်းပဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေက ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းရှိနေကြတယ်... MCA ကိုလည်း ချစ်တယ် ထိုအသင်းတော်များကိုလည်း ချစ်ကြတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိသဟတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အသင်းတော် တော်တော်များများက သင်းအုပ်ဆရာများ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေပေါ့နော်...တစ်ချို့က စာရေးလာပြီးတော့မှ ဆရာရဲ့ ဆရာ S.Gum Aung နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ အဖြေလေးတွေ ပေးလာတယ်...
နောက်ဒီအဖြေလေးတွေကို တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ အဖြေပေးတာတွေ အားလုံးက အမှန်ဖြစ်ပြီးတော့မှ ဆရာ S.Gum Aung ပလ္လင်ကိုသုံးပြီးတော့မှ သက်သေခံချက်တွေထဲမှာ တော်တော်များများက အမှားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆရာတို့ခံစားတယ်... အမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီပလ္လင်က ကျွန်တော်တို့ အမှား ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး သမ္မာတရားကိုပြောပြီးမှ လွှတ်ခြင်းကိုရဖို့ရန်အတွက် ဖြစ်သောကြောင့် ဒီနေ့ သူ့ရဲ့အမှားတွေထဲမှာမှ ဆရာတို့ သိသလောက်ပေါ့နော်... သေချာသိသလောက်က နံပတ် (၁) က သူ R.I.T ဆင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဆရာတို့ သေချာခံယူတယ်... R.I.T လုံးဝမပြီးဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားတယ်... ဒုတိယအချက်ကတော့ သူ ဘွဲ့တွေ ၉ လုံးလောက် ရပြီးတော့မှ ကြီးမားစွာ အဆင့် ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း အဲဒါက မမှန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်... ဒီ ၂ ချက်လောက်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ လုံလောက်ပါတယ်... ကျန်တာတွေကတော့ သူဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆရာတို့ မစဉ်းစားတော့ဘူး သို့သော် သူ့ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ အားလုံးအပေါ်မှာ အမှားတွေပါတယ်... သမ္မာတရားကို တိမ်းစောင်းပြီးမှ ပြောတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့် ဆရာတို့ MCA အသင်းတော်အနေနဲ့ သူ့ကို... (xxxxxxxx xxxx အသံဖြတ်ပစ်ထား...)
ကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးတော့မှ ၀က်ဆိုဒ်မှာ ဆရာတို့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးပြီ... အခုချိန်မှာတော့ ဆရာတို့ အသင်းတော်အနေနဲ့ ကြေငြာဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာကိုယ်တိုင် ထလာပြီးတော့မှ ဒီအရာကို တရားဝင်... တရားဝင်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့ သူရဲ့ သြ၀ါဒတွေဟာ မှားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဒီကနေပြီးတော့ အနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်... ဒီမှာရှိတဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားတွေလည်း သိရအောင်... ကိုယ်ယူသွားတဲ့ အခွေတွေရှိမယ်... ကိုယ်ယူသွားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ရဲ့ဟုတ်လား... လင့်ခ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း အားလုံးကိုဖျက်လိုက်ပါ... ဖျက်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်... ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးလို့... ဘုရားရှင်က သမ္မာတရားအားဖြင့်ပဲ ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်... အရောအနှောအားဖြင့် ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့... ဒါကြောင့်မို့လို့ မေတ္တာနဲ့လည်းပြောချင်တယ်... ပါဝင်ပေးတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ စေတနာနဲ့ စာတွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေပေါ်မှာလည်း ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ... အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အသင်းတော်ကိုယ်စား အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း... ဆရာဇော်မင်းကနေပြီးတော့ ပြောပါတယ်လို့... အယောက်တိုင်းအယောက်တိုင်းကို ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ...
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:45 PM , Links to this post ,0comments
Labels: S. Gum Aung
Vimuttisukha Bliss မှ
ဘုန်းဘုန်း လင်္ကာအရှင်ဘုရား။ သူ့ရဲ့ ကျန်တဲ့ တရားနှစ်ပုဒ်ကိုလည်း နားထောင်ပြီး လွဲနေတာများကို အားလုံးအတွက် ရှင်းပြပေးပါအုံးလို့ ရိုသေစွာဖြင့် လျှောက်ထားပါတယ်ဘုရား………………………. ဆိုလို့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာမှ http://www.youtube.com/watch?v=NQbm6gVMq_8&list=UUtcxeCFiTcZsZa3rZJSOh_g&index=2&feature=plcp မှာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များအပေါ်မှာ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာ၏ ယူဆပြောဆိုနေမှု တို့ဟာ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထလောက်အောင်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ပင်ကောင်းလှပေတော့၏ ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း ????
ငှက်မှန်လျှင် ပျံရင်းသေ လူမှန်လျှင်လည်း ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ရင်း သေကြရမယ် သေပြန်တော့လည်း မွေးကတည်းကပါလာတဲ့ အတွက် မည်သည့်ကုသိုလ်ပြုပြု ငရဲကျရမှာပါပဲ (တစ်နည်းအားဖြင့် ဒါန သီလ ဘာဝနာဟာ ဘာအကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိပါဘူး )စသည်ဖြင့် 
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က မက္ခလိဂေါသာလဆိုတဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံးဂိုဏ်းဆရာကြီးရဲ့
'ငါသည် ဤသီလဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤကျင့်ဝတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤခြိုးခြံမှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤအကျင့်မြတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မရင့်သေးသော ကံကိုမူလည်း ရင့်စေမည် ရင့်ပြီးသော ကံကိုမူလည်း တွေ့၍ တွေ့၍ ပျက်စီးစေမည်'ဟုဤသို့ (ပြုပြင်နိုင်ခြင်း မရှိ) “ …..လို့ ယူတဲ့ အယူမှားတွေကိုဖြန့်ဝေဟောပြောနေတာ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ ။
ယင်း တိတ္ထိဆရာကြီး မက္ခလိဂေါသာလ၏ အယူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က-
“ ရဟန်းတို့ မြစ်ဆုံမြစ်ဝ၌ ထောင်ထားသော မြှုံးသည် များစွာကုန်သော ငါးတို့၏ အစီးအပွါးမဲ့ရန် ဆင်းရဲရန် အကျိုးမရှိ ပျက်စီးရန် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် လူထောင်မြှုံးကဲ့သို့ လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မက္ခလိဂေါသာလသည် များစွာ သော သတ္တဝါတို့၏ အစီးအပွားမဲ့ရန် ဆင်းရဲရန် အကျိုးမရှိ ပျက်စီးရန် ဖြစ်၏ “ဟု ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချတော်မူခဲ့ပေ၏
ဒါ့ကြောင့် ယင်း Video file ကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းမပေးခင် တိတ္ထိဂိုဏ်းဆရာကြီးတို့အယူအဆကို အထူးသဖြင့် ယင်း ဓမ္မဆရာက တစ်ဖန်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လာသော မက္ခလိဂေါသာလ၏ အယူဝါဒကို မိစ္ဆာအယူဝါဒများကိုနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ မိမိပို့စ်နဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း နားလည်လွယ်စေဖို့ ရှေးဦးစွာ ကြိုတင်၍ တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မမူခင်က တိတ္ထိဂိုဏ်းဆရာကြီးများသည် အလွန်စားသာလှပေ၏ ။ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်မိုက်နေတဲ့လောကကြီးအတွင်းကမျက်ကန်းများကို မျက်မမြင်ကလမ်းပြနေဘိ၏သို့တည်း ။သို့သော် အမှန်တရားကို ကြားပင်မကြားဖူးသူတို့အဖို့မှာ ယင်းအလိမ်အညာတရားကိုပင် အမှန်ထင်ကာ ကိုးစားနေကြရသည့် ခေတ်အခါကာလမဟုတ်ပါလား။ ဒါ့ကြောင့် ဇာတံ သရဏတော ဘယံ- ကိုးကွယ်မှုမှားယွင်းပါက ကိုးကွယ်ရာမှပင် ဘေးဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား ။
အရှင်ဘုရားက ဗုဒ္ဓစာပေတွေပဲ ဖတ်ဖတ်ပြီး တိတ္ထိ တိတ္ထိနဲ့မစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့ဘုရား တော်ကြာ သူတော်ကောင်းတရားတွေထွန်းကားအောင် ဟောကြားပြသနေတဲ့သူတော်စင်တွေများဖြစ်ခဲ့ရင် အရှင်ဘုရားပါ အပြစ်သင့်နေမယ်နော်လို့ နားမလည်သူတွေက ဆိုချင်ဆိုကြပါလိမ့်ဦးမယ် ။ ဟုတ်ပြီလေ ဒါဆို ယင်းဆရာကြီးတို့အယူဝါဒ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံဆိုိတာ အနည်းငယ် လေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့ ။
ဘုရားရှင်မပွင့်ခင်ထဲက ယင်းတိတ္ထိဂိုဏ်းကြီး (၆)ခုဆိုတာရှိခဲ့တာပါ ယင်းတို့ထဲက
၁။ ပူရဏကဿပ ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းဆရာကြီးအယူဝါဒကို အဇာတသတ်မင်းက မေးမြန်းစုံစမ်းရာမှာ
''မင်းကြီး ပြုသူ ပြုစေသူ ဖြတ်သူ ဖြတ်စေသူ နှိပ်စက်သူ နှိပ်စက်စေသူ ပူဆွေးအောင်ပြုသူ ပြုစေသူပင်ပန်းအောင် ပြုသူ ပြုစေသူ တုန်လှုပ်သူ တုန်လှုပ်စေသူ အသက်ကို သတ်သူ (သတ်စေသူ) ခိုးယူသူ (ခိုးယူစေသူ) အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းသူ (ဖောက်ထွင်းစေသူ) (ရွာကို) တိုက်ခိုက်လုယူသူ့ (တိုက်ခိုက်လုယူစေသူ) တစ်အိမ်တည်းကို တိုက်ခိုက်လုယူသူ (တိုက်ခိုက် လုယူ စေသူ) ခရီးလမ်း၌စောင့်၍ လုယက်သူ (လုယူစေသူ) သူ့မယားကို သွားလာသူ (သွားလာ စေသူ) မမှန်စကားကို ပြောသူ (ပြောစေသူ) များသည် မကောင်းမှုကို ပြုသော်လည်း ပြုသည် မမည်၊
ဤမြေပေါ်ရှိ သတ္တဝါတို့ကိုသင်တုန်းသွားစက်ဖြင့် တစ်ခုတည်းသော အသားစု အသားပုံ ဖြစ်အောင် အကယ်၍ ပြုစေကာမူထိုအကြောင်းကြောင့် မကောင်းမှု မရှိ၊ မကောင်းမှုဖြစ်ခြင်း မရှိ၊ ဂင်္ဂါမြစ်၏ တောင်ဘက်ကမ်း၌နေသော သူသည်လည်း၁ အသက်ကို သတ်လျက် သတ်စေ လျက် ဖြတ်လျက် ဖြတ်စေလျက်နှိပ်စက်လျက် နှိပ်စက်စေလျက် သွားစေကာမူ ထို (သတ်ခြင်း စသော) အကြောင်းကြောင့် မကောင်းမှုမရှိ၊ မကောင်းမှု ဖြစ်ခြင်းမရှိ၊
ဂင်္ဂါမြစ်၏ မြောက်ဘက် ကမ်း၌ နေသော သူသည်လည်း၂ လှူလျက်လှူစေလျက် ပူဇော်လျက် ပူဇော်စေလျက် သွားစေကာမူ ထို (လှူခြင်းစသော) အကြောင်းကြောင့်ကောင်းမှုမရှိ၊ ကောင်းမှု ဖြစ်ခြင်းမရှိ၊ အလှူပေးခြင်း ဣနြေ္ဒကို ဆုံးမခြင်း သီလစောင့်စည်းခြင်းအမှန်ဆိုခြင်းတို့ကြောင့် ကောင်းမှုမရှိ၊ ကောင်းမှု ဖြစ်ခြင်းမရှိ''ဟု ပြောဆိုပါသတဲ့ ။
၂။ ဂင်္ဂါမြစ် မြောက်ဘက်ကမ်းသားတို့သည် သဒ္ဓါတရားရှိကုန်၏၊ ဘုရားတရားသံဃာကို ကြည်ညိုကုန်၏ဟု အဋ္ဌကထာ၌ ဆိုသည်။)
ယင်း ပုရာဏကဿပ တိတ္ထိခေါင်းဆောင်ကြီး၏ အယူဝါဒမှာ ကံမဲ့ဝါဒဖြစ်ပေသည် ။ သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲသူ ခိုးဝှက်သူ လုယက်သူစတဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာသောအကုသိုလ်ကပြုသူ နှင့် ကောင်းမှုကုသိုလ် ဒါန သီလ ဘာဝနာပြုသူတို့သည် အတူတူ လူလူချင်းသာဖြစ်ပေ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုဆိုတာ တကယ်မရှိသော ပညတ်မျှသာတည်းဟု ဟောပြောနေပေ၏။
ထင်းအယူအဆသာ တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်နှံ့သွားပါက သတ်ဖြတ်လုယက်ခြင်း စတဲ့ဒုစရိုက်မှုများသာ လောကကိုလွှမ်းမိုးသွားပေလိမ့်မည် ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်စောင့်စည်းရတဲ့သီလ ၊ မျှဝေသုံးဆောင်စားသုံးရတဲ့ ဒါန စိတ်ကိုဖြူစင်အောင် ရှုမှတ်ပွားများရတယ်ဆိုတဲ့ အထက်လမ်းဘာဝနာတရားကိုကား ယောင်၍ပင် အားထုတ်ကြတော့မည်မဟုတ်ပေ ။လူ့ဆိုတာ ပါပသ္မိ့ ရမတိ မနော ဆိုတဲ့အတိုင်း မကောင်းမှုမှာသာ မွေလျော်ကြသည်မဟုတ်ပါလား။
၂။ မင်းကြီးကတဖန် မက္ခလိဂေါသာလ၏ အယူဝါဒကိုမေးမြန်းကြည့်ပြန်ရာ ……
''မင်းကြီး သတ္တဝါတို့ ညစ်ညူးရန် အကြောင်းသည် မရှိ၊ အထောက်အပံ့သည် မရှိ၊ အကြောင်း မရှိအထောက်အပံ့ မရှိဘဲ သတ္တဝါတို့သည် ညစ်ညူးကုန်၏၊ သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ရန် အကြောင်းသည့်မရှိ၊ အထောက်အပံ့သည် မရှိ၊ အကြောင်းမရှိ အထောက်အပံ့ မရှိဘဲ သတ္တဝါတို့သည် စင်ကြယ်ကုန်၏၊
မိမိ ပြုလုပ်မှုသည် မရှိ၊ သူတစ်ပါးတို့ ပြုလုပ်ပေးမှုသည် မရှိ၊ ယောက်ျားတို့ ပြုလုပ်မှုသည် မရှိ၊ ခွန်အားသည် မရှိ၊ လုံ့လသည် မရှိ၊ ယောက်ျားတို့ စွမ်းအားသည် မရှိ၊ ယောက်ျားတို့အားထုတ်မှုသည် မရှိ၊ အလုံးစုံသော သတ္တဝါ အလုံးစုံသော သက်ရှူသတ္တဝါ အလုံး စုံသော ထင်ရှားဖြစ်သော သတ္တဝါ အလုံးစုံသော သက်ရှိအရာတို့သည် အစွမ်းမရှိကုန်၊ ခွန်အား မရှိကုန်၊ လုံ့လမရှိကုန်၊ ဖြစ်မြဲအတိုင်း ဆုံစည်းသည့်အတိုင်း သဘာဝအတိုင်း အမျိုးမျိုးဖြစ်ကုန်၍ဇာတ်အထူးခြောက်မျိုးတို့၌သာလျှင် ချမ်းသာဆင်းရဲကို ခံစားကုန်၏၊
ဤတစ်သန်း လေးသိန်းခြောက်ထောင့် ခြောက်ရာသော အဓိကသတ္တဝါမျိုးများ ငါးရာသော ကံများ ငါးပါးသော ကံများသုံးပါးသော ကံများ (ပြည့်သော) ကံများ ထက်ဝက်သော ကံများ ခြောက်ဆယ့်နှစ်ပါးသော အကျင့်များခြောက်ဆယ့်နှစ်ပါးသော အန္တရကပ်များ ခြောက်မျိုးသော ဇာတ်အထူးများ ရှစ်ပါး သောယောက်ျားတို့၏ အရွယ်များ လေးထောင့်ကိုးရာသော အသက်မွေးမှုများ လေးထောင့် ကိုးရာသောပရိဗိုဇ်များ လေးထောင့်ကိုးရာသော နဂါးတို့နေရာများ နှစ်ထောင်သော ဣနြေ္ဒများ သုံးထောင်သောငရဲများ သုံးဆယ့်ခြောက်မျိုးသော မြူဓာတ် (တည်ရာ) များ ခုနစ်မျိုးသော သညာရှိပဋိသန္ဓေများခုနစ်မျိုးသော သညာမဲ့ပဋိသန္ဓေများ ခုနစ်မျိုးသော အဆစ် ပဋိသန္ဓေများ ခုနစ်မျိုးသော နတ်များခုနစ်မျိုးသော လူများ ခုနစ်မျိုးသော မြေဖုတ်ဘီလူးများ ခုနစ်ခုသော အိုင်ကြီးများ ခုနစ်ခုသောအဖုကြီးများ ခုနစ်ရာသော အဖုငယ်များ ခုနစ်ခုသော ချောက်ကြီးများ ခုနစ်ရာသော ချောက်ငယ်များခုနစ်ခုသော အိပ်မက်ကြီးများ ခုနစ်ရာသော အိပ်မက်ငယ်များ ရှစ်သန်းလေးသိန်းသော မဟာကပ်များရှိကုန်၏၊ ယင်း (မဟာကပ်တို့) ပတ်လုံး လူမိုက်ဖြစ်စေ ပညာရှိဖြစ်စေ (တစ်ဘဝမှ တစ်ဘဝသို့) ပြေးသွားကျင်လည်၍ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုကြလတ္တံ့၊ ထိုအတွင်း (ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်း) မရှိ၊
'ငါသည် ဤသီလဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤကျင့်ဝတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤခြိုးခြံမှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤအကျင့်မြတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မရင့်သေးသော ကံကိုမူလည်း ရင့်စေမည် ရင့်ပြီးသော ကံကိုမူလည်း တွေ့၍ တွေ့၍ ပျက်စီးစေမည်'ဟုဤသို့ (ပြုပြင်နိုင်ခြင်း မရှိ)၊ ချမ်းသာ ဆင်းရဲသည် စရွတ်တောင်းဖြင့် ခြင်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်၏၊ သံသရာသည် အပိုင်းအခြား ပြုထားပြီးဖြစ်၏၊ အတိုး အဆုတ် မရှိ၊ အလွန် အယုတ် မရှိ၊ ချည်လုံးကိုပစ်လိုက်သော် (ချည်ရှိသရွေ့သာ) ပြေလျက် ပြေးသွားသကဲ့သို့ ဤအတူ လူမိုက်ဖြစ်စေ ပညာရှိဖြစ်စေ (တစ်ဘဝမှ တစ်ဘဝသို့) ပြေးသွားကျင်လည်၍ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုကြလတ္တံ့''ဟု ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးတရားများကို ပစ်ပယ်ကာ သံသရာမှ အလိုလိုစင်ကြယ်ခြင်းကိုသာ ပြောဆိုပြန်ပါသတဲ့ …….
'ငါသည် ဤသီလဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤကျင့်ဝတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤခြိုးခြံမှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤအကျင့်မြတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မရင့်သေးသော ကံကိုမူလည်း ရင့်စေမည် ရင့်ပြီးသော ကံကိုမူလည်း တွေ့၍ တွေ့၍ ပျက်စီးစေမည်'ဟုဤသို့ (ပြုပြင်နိုင်ခြင်း မရှိ) ဆိုတာလေးကို သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လျှင် မည်မျှရွံရှာဖွယ်ကောင်းလှသည်ကို သိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်၏။ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်ခြင်းဖြင့် သံသရာမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ပေလို့ခံယူလိုက်သည်နှင့် သူ့အသက်သတ်မှု သူ့ဥစ္စာခိုး သူ့သားမယားမှ စောင့်စည်းခြင်းစတဲ့ သီလတရားများကို ကျင့်သုံးကြတော့မည်မဟုတ်ပေ။ သူယုတ်ရော သူမြတ်ပါ အတူတကွ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း ။ ယင်းသို့အယူမှားခြင်းမှသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိအားကိုးပြီး မိမိဖာသာအပြစ်ကိုဖြူစင်အောင်ဆေးကြောခြင်း ကုသိုလ်တရားများ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း စတဲ့ သံသရာမှလွတ်မြောက်ကြေင်း သဒ္ဓါ ၀ီရိယ သတိ သမာဓိ ပညာတရားများလည်း ယုတ်လျော့သွားကာ လက်ရှိအဆင့်အတန်းမှ လျောကျဖို့သာရှိပေတော့၏။
ယင်းမက္ခလိဂေါသာလနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက လောကမှာ အယုတ်ညံ့ဆုံးအယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် နိကနိပါတ် ကေသကမ္ဗလသုတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ဖော်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပေ၏ …
ရဟန်းတို့ ချည်မျှင်ဖြင့် ရက်အပ်ကုန်သော အဝတ်ဟူသမျှတို့တွင် လူဆံချည်မျှင်ဖြင့် ရက်ထားသော ကမ္ဗလာကို (ထို အဝတ်တို့အောက်) အယုတ်ညံ့ဆုံး အဝတ်ဟု ဆိုထိုက်၏။
ရဟန်းတို့ လူဆံချည်မျှင်ဖြင့် ရက်ထားသော ကမ္ဗလာသည် အေးသောရာသီ၌ အလွန်အေး၏၊ ပူအိုက်သော ရာသီ၌ အလွန်ပူအိုက်၏၊ အဆင်းမလှ၊ အနံ့မကောင်း၊ ကြမ်းတမ်းသော အတွေ့အထိ ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအတူ သာလျှင် များစွာကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏတို့၏ အယူဝါဒဟူသမျှတို့တွင် မက္ခလိဂေါသာလ၏ အယူဝါဒကို (ထို အယူဝါဒတို့အောက်) အယုတ်ညံ့ဆုံးဟူ၍ ဆိုထိုက်၏။
ရဟန်းတို့ (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မက္ခလိဂေါသာလသည်
''ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ မရှိ၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်းမရှိ၊ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယမရှိ''ဟု ဆိုလေ့ရှိ၏၊ ဤသို့ ယူလေ့ ရှိ၏။
ရဟန်းတို့ ရှေးလွန်လေပြီးသော ကာလ၌ ပွင့်တော်မူကြကုန်ပြီးသော ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော ဘုရားရှင်တို့သည်လည်း ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ ရှိ၏၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်းရှိ၏၊ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယရှိ၏ဟု ဟောတော်မူခဲ့ကုန်ပြီ။ ရဟန်းတို့ (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မက္ခလိဂေါသာလသည် ထို ပွင့်တော်မူကုန်ပြီးသော ဘုရားရှင်တို့ကိုလည်း ''ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံသည် မရှိ၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်းမရှိ၊ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယ မရှိ''ဟု တားမြစ်၏။ ရဟန်းတို့ လာလတ္တံ့သော ကာလ၌ ပွင့်တော်မူလတ္တံ့သော ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော ဘုရားရှင်တို့သည်လည်း ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ ရှိ၏၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်းရှိ၏၊ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယရှိ၏ဟု ဟောတော်မူကုန်လတ္တံ့။ ရဟန်းတို့ (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မက္ခလိဂေါသာလသည် ပွင့်တော်မူလတ္တံ့သော ဘုရားရှင်တို့ကိုလည်း ''ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံသည် မရှိ၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်း မရှိ၊ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယ မရှိ''ဟု တားမြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ယခုအခါ၌ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော ငါသည်လည်း ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ ရှိ၏၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်း ရှိ၏၊ အားထုတ်အပ် သော ဝီရိယရှိ၏ဟု ဟောတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့ (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မက္ခလိ ဂေါသာလသည် ငါ့ကိုလည်း ''ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံသည် မရှိ၊ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံကို ပြုခြင်း မရှိ၊ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယ မရှိ''ဟု တားမြစ်၏။
ရဟန်းတို့ မြစ်ဆုံမြစ်ဝ၌ ထောင်ထားသော မြှုံးသည် များစွာကုန်သော ငါးတို့၏ အစီးအပွါးမဲ့ရန် ဆင်းရဲရန် အကျိုးမရှိ ပျက်စီးရန် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် လူထောင်မြှုံးကဲ့သို့ လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မက္ခလိဂေါသာလသည် များစွာ သော သတ္တဝါတို့၏ အစီးအပွားမဲ့ရန် ဆင်းရဲရန် အကျိုးမရှိ ပျက်စီးရန် ဖြစ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
ဘုရားရှင်၏ ယင်းထုတ်ဖော်ဟောကြားချက်ကို ကြည့်ရုံနှင့်ပင် လူတို့၏ သဒ္ဓါ ပညာ ၀ီရိယ စွမ်းအားကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးကာ ဒုစရိုက်များ ပေါ်ပေါက်လာရန်တွန်းအားပေးတဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံးဝါဒတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလှပေတော့၏ ။
၃။ အဇိတကေသကမ္ဗလ၏ အယူဝါဒ မေးမြန်းကြည့်ရာမှာလည်း …..
''မင်းကြီး ပေးလှူခြင်း(၏အကျိုး)သည် မရှိ
ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့၏ အကျိုးဝိပါက်သည် မရှိ၊
တစ်ပါးသော လောကသည် မရှိ၊
အမိ၌ ကောင်းစွာပြုခြင်း မကောင်းစွာပြုခြင်း၏ အကျိုးမရှိ
အဖအမိ၌ ကောင်းစွာပြုခြင်း မကောင်းစွာပြုခြင်း၏ အကျိုးမရှိ
သေ၍ တစ်ဖန်ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့သည် မရှိကုန်၊
ဤလောကကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ပါးသော လောကကိုလည်းကောင်း ကိုယ်တိုင် ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိ၍မျက်မှောက်ပြုလျက် ဟောကြားနိုင်ကုန်သော ဖြောင့်မှန်သော အရိယမဂ်သို့ ရောက်ကုန်သော ကောင်းသော အကျင့် ရှိကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏတို့သည် လောက၌ မရှိကုန်၊
ဤသတ္တဝါသည်မဟာဘုတ်လေးပါး အစုအဝေး ဖြစ်၏၊ သေသောအခါ မြေဓာတ်သည် မြေဓာတ်အစုသို့ ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊ ရေဓာတ်သည် ရေဓာတ်အစုသို့ ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊ မီးဓာတ်သည် မီးဓာတ်အစုသို့ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊ လေဓာတ်သည် လေဓာတ်အစုသို့ ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊
ညောင်စောင်းလျှင် ငါးခုမြောက်ဖြစ်သော ယောက်ျားတို့သည်သူသေကောင်ကို ယူ၍ သွားကုန်၏၊ သင်းချိုင်းတိုင်အောင် သူသေကောင်တို့သည် ထင်ကုန်၏၊ အရိုးတို့သည် ခိုအဆင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်၏၊ အလှူတို့သည် ပြာအဆုံးရှိကုန်၏၊ အလှူပေးခြင်းကိုလူမိုက်တို့က ပညတ်ထား၏၊ အချို့သူတို့သည် (ပေးလှူခြင်းစသည်) ရှိ၏ ဟူသော ဝါဒကို ဟောပြောကုန်၏၊ ထိုသူတို့၏ စကားသည် အချည်းနှီး ဖြစ်၏၊ မှားယွင်း၏၊ ယောင်ယမ်းပြောဆို သောစကားဖြစ်၏၊ လူမိုက်ဖြစ်စေ ပညာရှိဖြစ်စေ ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးလျှင် ပြတ်စဲကုန်၏၊ ပျက်စီး ကုန်၏၊ သေသည်မှ နောက်၌ မရှိကုန်''ဟု ပြောဆိုပါသည်။
စာဖတ်သူများတော့မသိပေ ကျွန်ုပ်သည်ကား ဤ အဇိတ ကေသကမ္ဗလ တိတ္ထိဆရာကြီး၏အယူအဆကို ကြားရသည်တွင် များစွာတုန်လှုပ်မိတော့၏ ။အဘယ့်ကြောင့်နည်း တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ ပဋိသန္ဓေနေရခြင်းတည်းဟူသော တမလွန်လောကမရှိဟု ဥစ္ဆေအယူဝါဒကို စွဲကိုင်လိုက်ရာမှ အမိအဖတို့အပေါ်၌ ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်း ပစ်မှားစော်ကားခြင်း လှုဒါန်းပေးကမ်းခြင်း သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခြင်းတို့သည် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ။ ပေးလှုခြင်း သီလစောင့်ခြင်းသည် အကျိုးရှိ၏ဟူသော သူတို့၏အယူသည်အချီးနှီးအကျိုးမဲ့သာဖြစ်၏ဟု ယူဆလိုက်တော့၏ ။အဘယ့်ကြောင့်နည်း ယင်းသို့ ယူဆပြောဟောနေဘိသနည်း …ရှင်းပါသည်
“ ဤသတ္တဝါသည်မဟာဘုတ်လေးပါး အစုအဝေး ဖြစ်၏၊ သေသောအခါ မြေဓာတ်သည် မြေဓာတ်အစုသို့ ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊ ရေဓာတ်သည် ရေဓာတ်အစုသို့ ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊ မီးဓာတ်သည် မီးဓာတ်အစုသို့ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊ လေဓာတ်သည် လေဓာတ်အစုသို့ ဆိုက်၏၊ ရောက်၏၊………… နာမ်ဣနြေ္ဒတို့သည်ကောင်းကင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုန်၏၊” လို့ လူဆိုတာ မြေ ရေ လေ မီး ဓာတ်ကြီးအစုသာဖြစ်ပြီး သေလျှင် မြေကမြေမှုန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲ နာမ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဝိညာဏ်သာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်ရသည်ဟု ။နောက်ဘ၀ကို ပြည်ဖုံးကားချပစ်လိုက်သောကြောင့် မိုက်တွင်းနက်သွားရပေတော့၏။ ယင်းအယူဝါဒကို တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေကြသော သမာသမတ်ကျသည့် မည်သည့်အာဏာပိုင်ကမျှ အားပေးလက်ခံကျင့်သုံးစေမည်မဟုတ်ပေ ။ မိဘများ ဆရာသမားများကလည်း ကိုယ်မွေးသည့်မြောက်က ကိုယ့်ပြန်ခြောက်လှန့်ခြင်းခံကြရမည်ကို ကြောက်ရွံရွံမုန်းကြကာ ယင်းအယူဝါဒကို တားဆီး ကာကွယ်ကြမည်သာဖြစ်ပေ၏။
ယင်းသို့ဆိုလျှင် အရှင်ဘုရားရယ် ယင်းအဓမ္မဆရာကြီးမှာ ထမင်းငတ်သေရုံသာရှိတော့မပေါ့ဟုသာ အပေါ်ယံကောက်ချက် ဆွဲမိကောင်း ဆွဲမိကြပေလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ ယင်းဓမ္မဆရာကြီးမှာ ပို၍ပင်တန်ခိုးအာဏာကြီးထွားကာ တပည့်သာဝကများစွာတိုးပွား၍သာနေပေသေး၏။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း အချို့သောသူများမှာ စိတ်ယုတ်မာဖြင့် အတွင်းပုတ်ကာ ပျက်စီးနေကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကဲ့သို့ ကံကံ၏အကျိုးကိုဒဲ့ဒိုးဟောကြားက ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ကိုယ်သာခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ မည်သည့်ကယ်တင်ရှင်ကိုတမ်းတတမ်းတ လွတ်လမ်းရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဥပမာ သားကသတ်သော ပစ်မှုကို ဖခင်က၀င်၍ အစားခံရရိုးထုံးစံမရှီပဲ မိမိပြစ်ဒဏ်မိမိခံရဘိသကဲ့သို့ ကောင်းမှုပြုရာမှာလည်း သူဇာဗျိုင်းမ တို့ နှင့် ရေ၀တီသူဋ္ဌေးကတော်တို့ကဲ့သို့ လင်ပြုသည့်ကုသိုလ်ကံကိုလည်း မယားကခံစားရမည်မဟုတ်ပဲ မိမိထိုက်နှင့် မိမိကံ ခါးစည်းခံရမည်သာဖြစ်ကြောင်းပြောဟောနေသောအခါ ယင်းဒုစရိုက်သမားတို့အတွက် မိုက်ဖို့ဆိုးဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ချေ ။ တစ်ချို့လူများကြပြန်တော့ မသိသည့်အလျှောက် မိုက်မှားမိသည့်အလျှောက် ဒုစရိုက်များကိုပြုမိခဲ့ရာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုကြားကြရသောအခါ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကာ နောင်သံသရာမှာ မိမိထံယင်းအကုသိုလ်ကံတွေက အကျိုးပေးရန် တစ်ဖန်ပြန်လာကြလိမ့်ဥိးမည်ဟုတွေးကာ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြရသူများဖြစ်ကြ၏။ ယင်းလူမိုက်များသည် နောက်တစ်ဖန်နောင်အနာဂတ် သံသရာဆိုိတာကို မျှော်၍ကြည့်ပြန်ပါကလည်း မိမိတို့ညာဏ်မမှီသည့်အလျှောက် ဘာမှနားလည်ချဉ်းကပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြချေ ၊
ယင်းကဲ့သို့ အားကိုးရာမဲ့ မျက်နှာငယ်နေကြချိန်မှာမှ လူလိမ်ဂိုဏ်းဆရာကြီးများက အကွက်ကျကျ “ငါတို့ အယူဝါဒကမှ မင်းတို့ဒုက္ခကို ကယ်မနိုင်ပါတယ်ကွာ ဟော ကြည့်စမ်း- အနာဂတ်နောင်ဘ၀ဆိုတာမရှိပါဘူး၊လှုဒါန်းခြင်း ပေကမ်းခြင်းဆိုတာ တို့ဘာသာမှာ လူ့ဘုံနတ်ဘုံ ဗြဟ္မာ့ဘုံနဲ့ အပါယ်ငရဲ စတာတွေ ပညတ်မထားလို့ ဘယ်မှာလာပြီးအကျိုးပေးနိုင်တော့မှာလဲ၊
လူဆိုတာ မြေကဖြစ်လို့ သေတဲ့အခါ မင်းခန္ဓာကိုယ်ကမြေထဲပြန်သွားရမှာ ဒါပေမယ် မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဏ်ကတော့ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ငါတို့ဂိုဏ်းဆရာကြီး အဇိတကေသကမ္ဗလနဲ့အတူ စံမြန်းရမှာပါ မင်းအဖေကိုသတ်ခဲ့သလား စိတ်သောကများမနေစမ်းပါနဲ့ အမေကိုစော်ကားခဲ့လည်း အတိတ်ကိုခ၀ါချထားခဲ့ပါ ငါတို့အယူကို ယူလိုက်တာနဲ့ မင်းတို့အပြစ်တွေအကုန်ပျောက်ပြိး သေလျှင် ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ရမှာပါ “
ဒီလိုတွေ ဆွယ်တရားဟောလိုက်တော့ ညာဏ်နည်းပါးတဲ့ယင်းငမိုက်သားတွေခများ ဟာ ဟုတ်ပေသားပဲ တို့ကို ငရဲနဲ့ခြောက် ဘုံနဲ့မြှောက်နေခဲ့တာ ခုတော့တို့အပြစ်တွေကွင်းလုံးကျွတ်ပြီ လုပ်ချင်ရာလုပ်နိုင်ပြီဟုဆိုကာ ယင်းတို့သောကကို တစ်ခဏတာဆေးကြောပေးလိုက်တဲ့ ယင်းဆရာသမားတွေကို အသက်ပါအပ်နှင်း ပူဇော်ခြင်းတွေပြုကြတော့တာပေါ့ ။ ဒါ့ကြောင့် ယင်းအဓမ္မ မိစ္ဆာဝါဒဟာ သက်ဆိုးရှည်ကာ ယင်းဓမ္မဆရာကြီးလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ စားပေါက်ချောင်ခဲ့တာပဲလို့သာ မှတ်ရမှာပါ ။ သို့သော် သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမြတ်နိုးသူ မည်သူမဆို ယင်းကဲ့သို့ အဖေအမေကိုိတောင် စော်ကားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ယင်းဝါဒကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းတိုက်ဖျက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် သို့မဟုတ်ပါက ယင်းလူတွေက ခင်များမွေးလို့လူဖြစ်လာရတာ ခင်များကျေးဇူးတစ်ပြားသားမှမပါပါဘူးဗျာ ဟုဆိုကာ မိခင်ရင်းကိုပင် ပါးချသွားပါလိမ့်မယ် ။မိဘကိုပင် မချစ်ခင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အခြားသူများကို မေတ္တာထားနိုင်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူး ။ဒါကြောင့်မို့ ယင်း ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူဝါဒကို လောကအယုတ်ဆုံးဝါဒလို့ သတ်မှတ်ကြတာမဟုတ်ပါလား ။
၄။ ပကုဓကစ္စာယန၏ အယူဝါဒကို မေးကြည့်ပြန်ရာ
''မင်းကြီး ဤခုနစ်ပါးသော အစုတို့သည် ပြုလုပ်ထားသည် မဟုတ်ကုန်၊ ပြုလုပ်ထားစေသည်မဟုတ်ကုန်၊ ဖန်ဆင်းထားသည် မဟုတ်ကုန်၊ ဖန်ဆင်းထားစေသည် မဟုတ်ကုန်၊ မြုံကုန်၏၊ တောင်ထွတ်ကဲ့သို့ တည်ကုန်၏၊ ခိုင်မြဲသော တံခါးတိုင်ကဲ့သို့ တည်ကုန်၏၊ ထိုအစုတို့သည် မတုန်လှုပ်ကုန်၊ မဖောက်ပြန်ကုန်၊ အချင်းချင်း မညှဉ်းဆဲနိုင်ကုန်၊ အချင်းချင်းချမ်းသာရန်လည်းကောင်း ဆင်းရဲရန်လည်းကောင်း ချမ်းသာ ဆင်းရဲရန်လည်းကောင်း မတတ်နိုင်ကုန်၊ ခုနစ်ပါးတို့ ဟူသည်အဘယ်နည်း -
မြေအစု၊ ရေအစု၊ မီးအစု၊ လေအစု၊ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ၊ ခုနစ်ခုမြောက်အသက်တို့တည်း။ဤခုနစ်ပါးသော အစုတို့သည် ပြုလုပ်ထားသည် မဟုတ်ကုန်၊ ပြုလုပ်ထားစေသည် မဟုတ် ကုန်၊ ဖန်ဆင်းထားသည် မဟုတ်ကုန်၊ ဖန်ဆင်းထားစေသည် မဟုတ်ကုန်၊ မြုံကုန်၏၊ တောင် ထွတ်ကဲ့သို့ တည်ကုန်၏၊ ခိုင်မြဲသော တံခါးတိုင်ကဲ့သို့ တည်ကုန်၏၊ ထိုအစုတို့သည် မတုန်လှုပ် ကုန်၊ မဖောက်ပြန်ကုန်၊ အချင်းချင်း မညှဉ်းဆဲနိုင်ကုန်၊ အချင်းချင်း ချမ်းသာရန်လည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲရန်လည်းကောင်း၊ ချမ်းသာဆင်းရဲရန်လည်းကောင်း မတတ်နိုင်ကုန်၊ ထိုအစုတို့၌
သတ်သူ သတ်စေသူ ကြားသူ ကြားစေသူ သိသူ သိစေသူများ မရှိကုန်၊ ထက်စွာသော လက်နက်ဖြင့် ဦးခေါင်းကိုဖြတ်စေကာမူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သတ်သည် မမည်၊ လက်နက်သည်ခုနစ်ပါးသော အစုတို့၏ အကြား ဟင်းလင်းသို့ ကျရောက်၏''ဟု ပြောဆိုပါသည်။
ယင်းအယူအဆသည်လည်း အလွန်အင်မတန်မှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှပေ၏ သို့သော် မသူတော်တို့အတွက်ကား အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်နေပေ၏။ လူတစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ဓားနဲ့ထိုးသတ်လျှင်ပင် ဓာတ်ခုနစ်ပါးကြား ဓားဝင်သွားခြင်းသာတည်း ၊ သတ်သည်သေသည် မမည်ဟု ဆိုထားပေ၏။ သတ်သူကိုတရားစွဲလျှင်ပင် ယင်းသတ်သူက သူ့မှာဘာအပြစ်မှမရှိပါပဲ လာစွပ်စွဲတယ်ဆိုကာ အသရေဖျက်မှုနှင့်ပြန်လှန်စွပ်စွဲမှာကိုပင် ကြောက်ရပေလိမ့်မည်။ အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်းကို မှန်ကန်စွာခွဲခြားဝေဖန်မပြနိုင်သော မည်သည့်ဘာသာမဆို သူတော်ကောင်းတို့အတွက် စိတ်ဆင်းရဲဖွယ်သာဖြစ်ပြီး လူ့အန္ဓဗာလ အမိုက်ကောင်များ၏ အမှောင်ခိုရာ နေရာကြီးသာဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ဖြစ်၏။
၅။ နိဂဏ္ဌနာဋပုတ္တ၏ အယူဝါဒကား
''မင်းကြီး ဤ (လောက) ၌ နိဂဏ္ဌသည် လေးမျိုးသော စောင့်စည်းခြင်းဖြင့် စောင့်စည်း၏၊ မင်းကြီးနိဂဏ္ဌသည် လေးမျိုးသော စောင့်စည်းခြင်းဖြင့် အဘယ်သို့ စောင့်စည်းသနည်းဟူမူ-မင်းကြီး ဤလောက၌နိဂဏ္ဌသည် အလုံးစုံသော ရေအေးကို တားမြစ်၏၊
(မကောင်းမှုကို) အလုံးစုံ တားမြစ်၏၊
(မကောင်းမှုကို) အလုံးစုံ တားမြစ်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခွါပြီး ဖြစ်၏၊
(မကောင်းမှု ကို) အလုံးစုံတားမြစ်ခြင်းဖြင့် (လွတ်မြောက်ရာကို) တွေ့ပြီးဖြစ်၏၊
မင်းကြီး ဤလေးမျိုးသော စောင့်စည်းခြင်းဖြင့်စောင့်စည်းပြီးသော ဤနိဂဏ္ဌနာဋပုတ္တကို အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သော စိတ်ရှိသူ စောင့်စည်းသောစိတ်ရှိသူ တည်ကြည်သော စိတ်ရှိသူဟု ဆိုအပ်၏''ဟု ပြောဆို ပါသည်။
အင်း ဒိပြင့် တိတ္ထိဂိုဏ်းဆရာကြီးတွေနဲ့စာရင် နိဂဏ္ဍကမှ အံမယ်စောင့်စည်းခြင်းလေးမျိုးတွေ ဘာတွေနဲ့ ဟုတ်ပြီလေ အသေးစိတ်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့ ၊
မဇ္ဈိမနိကာယ် စူဠ ဒုက္ခခန္ဓသုတ်၌ မဟာနာမ်မင်းအား နိဂဏ္ဍတို့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့ပုံမှာ
၁၇၉။ မဟာနာမ် ငါသည် အခါတစ်ပါး၌ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ နေ၏။ ထိုအခါ များစွာသောနိဂဏ္ဌတို့သည် ဣသိဂိလိတောင်နံဘေး ကျောက်ဖျာနက်ပေါ်၌ ထိုင်နေခြင်းကို ပယ်ကြကုန် လျက်မတ်မတ်ရပ် တည်နေကြကုန်၏၊ အားထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သော ထက်မြက် ကြမ်းတမ်းစပ်ရှားသော ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို ခံစားကြကုန်၏။
မဟာနာမ် ထိုအခါ ငါသည် ညနေချမ်းအချိန်၌ ကိန်းအောင်းရာမှထလျက် ဣသိဂိလိတောင်နံဘေး ကျောက်ဖျာနက်ပေါ်ရှိ ထိုနိဂဏ္ဌတို့အထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးသော် ''ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ အဘယ်ကြောင့် သင်တို့သည် ထိုင်နေခြင်းကို ပယ်၍ မတ်မတ်ရပ်တည်နေကြလျက် အားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ထက်မြက် ကြမ်းတမ်း စပ်ရှားသော ဒုက္ခဝေဒနာတို့ကို ခံစားကြကုန်သနည်း'' ဟုပြောဆို၏။ မဟာနာမ် ဤသို့ ပြောဆိုသော် ထိုနိဂဏ္ဌတို့က ငါ့အား
''ငါ့သျှင် နာဋ၏သား နိဂဏ္ဌသည်အလုံးစုံကို သိ၏၊ အလုံးစုံကို မြင်၏၊ သွားနေစဉ် ရပ်နေစဉ် အိပ်နေစဉ် နိုးနေစဉ် ဉာဏ်အမြင်သည်ငါ့အား အမြဲမပြတ် ရှေးရှုထင်၏ဟု ဉာဏ်အမြင်အကြောင်းကို အကြွင်းမဲ့ဝန်ခံ၏၊ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏ္ဌသည်
'အိုနိဂဏ္ဌတို့ ရှေး၌ပြုထားသော မကောင်းမှုကံသည် ရှိသည်သာတည်း၊ ထိုမကောင်းမှုကံကို ဤစပ်ရှားလှသည့် ပြုနိုင်ခဲသော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းဖြင့် ချေဖျက်ကြကုန်လော့၊ ယခုဘဝ၌ ကိုယ်ဖြင့်စောင့်စည်းခြင်း နှုတ်ဖြင့်စောင့်စည်းခြင်း စိတ်ဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ပင် နောင်ဘဝ၌ မကောင်းမှုကံကို မပြုခြင်းဖြစ်၏၊ ဤသို့လျှင် ကံဟောင်းတို့ကို အကျင့်ဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်း, ကံသစ်တို့ကို မပြုခြင်းကြောင့် နောင်ဘဝ၌ မတိုးပွားခြင်းဖြစ်၏၊ နောင်ဘဝ၌ မတိုးပွားခြင်းကြောင့် ကံကုန်၏၊ ကံကုန်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခကုန်၏၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကုန်ခြင်းကြောင့် ခံစားခြင်းဝေဒနာကုန်၏၊ ဝေဒနာကုန်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးသည် ပျက်ပြုန်းလတ္တံ့'ဟု ဆို၏။
ထိုစကားကို ငါတို့သည် ကျေနပ်လည်း ကျေနပ်ကုန်၏၊ နှစ်သက်လည်း နှစ်သက်ကြကုန်၏၊ ထိုစကားဖြင့်လည်း ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏'' ဟု ငါ့အား ပြောဆိုကြကုန်၏။
၁၈ဝ။ မဟာနာမ် ဤသို့ပြောဆိုသော် ငါသည် ထိုနိဂဏ္ဌတို့အား- ''ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ 'ငါတို့သည်ရှေးက ဖြစ်ဖူးကြကုန်သည်သာ၊ မဖြစ်ဖူးကြကုန်သည် မဟုတ်'ဟု သင်တို့ သိကြကုန်သလော'' ဟုမေးမြန်းခဲ့၏၊
ငါ့သျှင် မသိကြပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။ ''ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ 'ငါတို့သည် ရှေးက မကောင်းမှုကံ့ကို ပြုခဲ့ဖူးသည်သာ၊ မပြုခဲ့ကြဖူးသည် မဟုတ်'ဟု သင်တို့ သိကြကုန်သလော'' ဟု (မေးမြန်းခဲ့၏) ငါ့သျှင် မသိကြပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ 'ဤသို့ ဤသို့သော မကောင်းမှုကံကိုပြုခဲ့ကြဖူးကုန်ပြီ'ဟု သင်တို့ သိကြကုန်သလော'' ဟု (မေးမြန်းခဲ့၏)။ ငါ့သျှင် မသိကြပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။ ''ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ 'ဤမျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခကား ကျေပျက်ပြီးပြီ၊ ဤမျှသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ချေဖျက်ရ ဦးမည်၊ ဤမျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခ ကျေပျက်သော် ဆင်းရဲဒုက္ခ အလုံးစုံသည်ကျေပျက်လတ္တံ့'ဟု သင်တို့ သိကြကုန်သလော'' ဟု (မေးမြန်းခဲ့၏)။ ငါ့သျှင် မသိကြပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ မျက် မှောက်ဘဝ၌ပင် အကုသိုလ်တရားတို့၏ ပျောက်ကင်းခြင်းကို ကုသိုလ်တရားတို့၏ ပြည့်စုံခြင်းကို သင်တို့ သိကြကုန်သလော'' ဟု (မေးမြန်းခဲ့၏)။ ငါ့သျှင် မသိကြပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ 'ဤသို့လျှင် ငါတို့သည် ရှေးက ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးသည်သာ၊ မဖြစ်ခဲ့ကြဖူးသည်မဟုတ်'ဟု သင်တို့ မသိကြကုန်။ ငါတို့သည် 'ရှေးက မကောင်းမှုကံကို ပြုခဲ့ကြဖူးသည်သာ၊ မပြုခဲ့ကြဖူး သည် မဟုတ်ကုန်'ဟု မသိကြကုန်။ 'ဤသို့ ဤသို့သော မကောင်းမှုကံကိုပြုခဲ့ကြဖူးကုန်ပြီ'ဟု မသိ ကြကုန်။ 'ဤမျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခကား ကျေပျက်ပြီးပြီ၊ ဤမျှသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ချေဖျက်ရဦးမည်၊ ဤ မျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခ ကျေပျက်သော် ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံသည်ကျေပျက်လတ္တံ့'ဟု မသိကြကုန်။ မျက် မှောက်ဘဝ၌ပင် အကုသိုလ်တရားတို့၏ ပျောက်ကင်းခြင်းကုသိုလ်တရားတို့၏ ပြည့်စုံခြင်းကို မသိကြ ကုန်။ ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ ဤသို့ဖြစ်သော် လောက၌ကြမ်းတမ်းသူ သွေးစွန်းသောလက်ရှိသူ ကြမ်းကြုတ် သောအမှုရှိသူတို့သည် လူဖြစ်လာကုန်လျက်နိဂဏ္ဌတို့၌ ရှင်ရဟန်းပြုကြလေကုန်ယောင်တကား'' ဟု (မေး တော်မူ၏)။
..... ငါ့သျှင်ဂေါတမ ချမ်းသာ 'သုခ' ဖြင့် ချမ်းသာသုခကို မရနိုင်၊ ဆင်းရဲ 'ဒုက္ခ' ဖြင့်သာ ချမ်းသာ 'သုခ' ကိုရနိုင်၏။ ငါ့သျှင်ဂေါတမ သုခဖြင့် သုခကို ရနိုင်ငြားအံ့၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သောဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် သုခကို ရရာ၏၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည်အသျှင်ဂေါတမထက် သာလွန်၍ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရရာ၏ဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''အသျှင်နိဂဏ္ဌတို့သည် 'ငါ့သျှင်ဂေါတမ သုခဖြင့် သုခကို မရနိုင်၊ ဒုက္ခဖြင့်သာ သုခကို ရနိုင်၏။ ငါ့သျှင်ဂေါတမ သုခဖြင့် သုခကို ရနိုင်ငြားအံ့၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်း သည်သုခကို ရရာ၏၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် အသျှင်ဂေါတမ ထက်သာလွန်၍ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရ၏'ဟု တစ်ဖက်သတ်အားဖြင့် အဆောတလျှင် မဆင်ခြင်ဘဲ စကားကိုပြောဆိုမိကြ၏။ စင်စစ်ကား ဤအရာ၌ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရ မင်းနှင့်အသျှင်ဂေါတမတို့တွင် အဘယ်သူသည် သာလွန်၍ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရသနည်း'' ဟု ငါ့ကိုသာလျှင်ပြန်၍ မေးသင့်ပေ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
''ငါ့သျှင်ဂေါတမ ငါတို့သည် သုခဖြင့် သုခကို မရနိုင်၊ ဒုက္ခဖြင့် သုခကို ရနိုင်၏၊ ငါ့သျှင်ဂေါတမ သုခဖြင့်သုခကို ရနိုင်ငြားအံ့၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် သုခကို ရရာ၏၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် အသျှင်ဂေါတမထက် သာလွန်၍ချမ်းချမ်းသာသာ နေရရာ၏'' ဟု တစ်ဖက်သတ်အားဖြင့် အဆောတလျှင် မဆင်ခြင်ဘဲ စကားကို ပြောဆိုမိကြ၏။ စင်စစ်မူ ဤစကားသည် တည်ရှိစေဦး။ ယခုပင် ငါတို့သည် မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းနှင့် အသျှင်ဂေါတမတို့တွင် အဘယ်သူသည် သာလွန်၍ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရသနည်းဟု အသျှင်ဂေါတမအား မေးမြန်းကြပါကုန်၏'' ဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''ငါ့သျှင် နိဂဏ္ဌတို့ သို့ဖြစ်လျှင် ထိုအရာ၌ သင်တို့ကိုသာလျှင် ပြန်မေးအံ့၊ သင်တို့ သဘောကျသည့်အတိုင်း ဖြေကြားကြကုန်လော့။ ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြကုန်သနည်း၊့ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် ကိုယ်ကို မလှုပ်ရှားဘဲစကားမပြောဆိုဘဲ ခုနစ်ရက်တို့ပတ်လုံး ချမ်းသာသက်သက်ချည်း ခံစားလျက် နေရန်စွမ်းနိုင်အံ့လော'' ဟု (မေးတော်မူ၏)။ ငါ့သျှင် မစွမ်းနိုင်ပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြကုန်သနည်း၊ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော သေနိယမည်သောဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် ကိုယ်ကို မလှုပ်ရှားဘဲ စကားမပြောဆိုဘဲ ခြောက်ရက်တို့ပတ်လုံး။ပ။ ငါးရက်တို့ပတ်လုံး။ လေးရက်တို့ပတ်လုံး။ သုံးရက်တို့ပတ်လုံး။ နှစ်ရက်တို့ပတ်လုံး။ တစ်ရက်ပတ်လုံး ချမ်းသာသက်သက်ချည်း ခံစားလျက် နေရန် စွမ်းနိုင်အံ့လော'' ဟု (မေးတော်မူ၏)။ ငါ့သျှင် မစွမ်းနိုင်ပါဟု (ဆိုကြကုန်၏)။
''ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ ငါသည် ကိုယ်ကို မလှုပ်ရှားဘဲ စကားမပြောဆိုဘဲ တစ်ရက်ပတ်လုံး ချမ်းသာသက်သက်ချည်း ခံစားလျက်နေရန် စွမ်းနိုင်၏။ ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ ငါသည် ကိုယ်ကို မလှုပ်ရှားဘဲစကားမပြောဆိုဘဲ နှစ်ရက်တို့ပတ်လုံး။ သုံးရက်တို့ပတ်လုံး။ လေးရက်တို့ပတ်လုံး။ ငါးရက်တို့ပတ်လုံး။ ခြောက်ရက်တို့ ပတ်လုံး။ ခုနစ်ရက်တို့ပတ်လုံး ချမ်းသာသက်သက်ချည်း ခံစားလျက် နေရန် စွမ်းနိုင်၏။ ငါ့သျှင်နိဂဏ္ဌတို့ အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြကုန်သနည်း၊ ဤသို့ဖြစ်သော် မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသောသေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းနှင့် ငါတို့တွင် အဘယ်သူသည် သာလွန်၍ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရသနည်းဟု (မေးတော်မူ၏)။
အထက်ပါသုတ်လာ နိဂဏ္ဍတို့အယူ အကျင့်ကိုကြည့်လျှင်ပင် နိဂဏ္ဍများသည့် ဆရာ့ပါးစပ်ဖျား လမ်းဆုံးနေကြသူများသာတည်း သူတို့ဆရာနိကဏ္ဍပြောသလိုသာ အရင်ဘ၀ကအကုသိုလ်များကို ယခုဘ၀အပြီးပယ်သတ်ရမည် ဆင်းရဲပြင်းထန်စွာကျင့်ကြံရမည်ဟုဆိုလျှင် တစ်သက်တာကာလပတ်လုံးသာ သမဏသုခချမ်းသာမဖက် သက်သက်သော ဆူးပေါ်အိမ်ခြင်း ဣရိယာပုတ်တစ်ပါးထဲဖြင့် သာ ကြာမြင့်စွာဆောက်တည်နေကြခြင်းဖြင့်သာ မသေမချင်း မိမိကိုယ်ကိုယ်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ကြကုန်လျှက် အတ္တာကိလမထ အကျင့်သာကျင့်၍နေကြလေကုန်ရာ၏။
အရိပ်လိုနေပူကစောင့်ဆိုတာလို ဆင်းရဲဒုက္ခဖြင့်သာချမ်းသာသုခကို ရနိုင်ရာသည်ဟုဆိုငြားသော်လည်း တစ်စုံတစ်ခုသော သမဏသုခ သာမညဖလ ကိုမျှ ညွှန်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသော နိဂဏ္ဍဆရာကြီးအခြေအနေကိုပါ ထောက်ဆသိရှိနိုင်ပေ၏။
အင်္ဂုတ္ထိုရ် တိကနိပါတ် ဥပေါသထသုတ်မှာလည်း
ဝိသာခါ တက္ကတွန်း'နိဂဏ္ဌ'ဥပုသ်သည် အဘယ်သို့ ဖြစ်သနည်း၊
ဝိသာခါ တက္ကတွန်း ရဟန်းတို့ မည်သည် ရှိကုန်၏၊ ထိုသူတို့သည် တပည့်ကို ''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် အရှေ့အရပ် ယူဇနာတစ်ရာ အပြင်ဘက်ရှိ သတ္တဝါတို့၌ လက်နက်ကို ချထားလော့၁၊ အနောက်အရပ် ယူဇနာတစ်ရာ အပြင်ဘက်ရှိ သတ္တဝါတို့၌ လက်နက်ကို ချထားလော့၊ မြောက်အရပ် ယူဇနာတစ်ရာ အပြင်ဘက်ရှိ သတ္တဝါတို့၌ လက်နက်ကို ချထားလော့၊ တောင်အရပ် ယူဇနာတစ်ရာ အပြင်ဘက်ရှိ သတ္တဝါတို့၌ လက်နက်ကို ချထားလော့''ဟု ဆောက်တည်စေကုန်၏။
ဤသို့လျှင် အချို့သော သတ္တဝါတို့ကို သနားခြင်း စောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ ဆောက်တည်စေကုန်၏။ အချို့သော သတ္တဝါတို့ကို မသနားခြင့်းမစောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ ဆောက်တည်စေကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် ဥပုသ်နေ့၌ တပည့်ကို ''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် အဝတ် အားလုံးကို ချွတ်ချပြီးလျှင် ဤသို့ ဆိုလော့ ''ငါသည် တစ်စုံတစ်ခုသော အရပ် တစ်စုံတစ်ခုသော အခါဝယ် တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူအတွက်ကြောင့်ကြမှု မဖြစ်'' ငါ၏ အတွင်း အပသန္တာန်ဝယ် တစ်စုံ တစ်ခုသော ပရိက္ခရာ၌သော်လည်းကြောင့်ကြမှု မရှိ''ဟု ဆိုလော့ဟူ၍ ဆောက်တည်စေကုန်၏။ ဤသို့ပင် ဆောက်တည်စေသော်လည်း
ထိုသူ၏ အမိ အဖတို့သည် ''ဤသူကား ငါတို့၏သားတည်း''ဟု သိကုန်၏၊ ထိုသူကလည်း ''ဤသူတို့ကား ငါ၏ အမိ အဖတို့တည်း''ဟု သိ၏။ ထိုသူ၏ သား မယား တို့သည်လည်း ''ဤသူကား ငါတို့ကို လုပ်ကျွေးသူ အရှင်လင်တည်း''ဟု သိကုန်၏၊ ထိုသူကလည်း ''ဤသူကား ငါ၏ သား မယားတည်း''ဟု သိ၏၊ ထိုသူ၏ ကျွန်အလုပ်သမား ယောက်ျားတို့သည်လည်း ''ဤသူကား ငါတို့၏ သခင်တည်း''ဟု သိကုန်၏။ ထိုသူကလည်း ''ဤသူတို့ကား ငါ၏ ကျွန် အလုပ်သမား ယောက်ျားတို့တည်း''ဟု သိ၏။ ဤသို့လျှင် အမှန်တရားကို ဆောက်တည်စေရာ အခါ၌ပင် မမှန်သော စကားဆိုခြင်းကို ဆောက်တည်စေသည် မည်ကုန်၏၊ ထိုသူ၏ ဤသို့ ဆောက်တည်ခြင်းကို 'မမှန်သော စကားဆိုခြင်း'ဟု ငါဆို၏။
ထိုသူသည် ထို ညဉ့်လွန်သဖြင့် စည်းစိမ်တို့ကို မပေးဘဲသာလျှင် သုံးဆောင်၏၊ ထိုသူ၏ ဤသို့ သုံးဆောင်ခြင်းကို မပေးသည်ကို ယူခြင်းဟု ငါဆို၏။ ဝိသာခါ တက္ကတွန်း ဥပုသ်သည် ဤသို့ ဖြစ်၏၊ ဝိသာခါ ဤသို့ ကျင့်သုံးအပ်သော တက္ကတွန်းဥပုသ်သည် ကြီးမြတ်သော အကျိုး မရှိ၊ ကြီးမြတ်သော အာနိသင် မရှိ၊ ကြီးမြတ်သော အရောင်အလင်း မရှိ၊ ကြီးမြတ်သော ပျံ့ နှံ့ခြင်း မရှိ။ ………ဟုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယင်းကိုထောက်လျှင်ပင် ယင်းတို့ဥပုသ်မှာ သစ်ကြုတ်ဥပုသ်သဖွယ်သာဖြစ်ပေ၏ ။ မိမိ၏အဝေး၌ရောက်နေသော ယူဇနာတစ်ရာအပြင်ဖက်မှာ သတ္တ၀ါတွေကိုချမ်းသာပေးပါသတဲ့ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလေစွ ဥပုသ်လည်းရ လုပ်ချင်တာလည်းလုပ်လို့ရသည် ဟူလို ။
ဒါ့ကြောင့် အနှစ်မရှိတဲ့တောမှာ ကြက်ဆူက မင်းမူ ဆိုတာလို အသိညာဏ်မဲ့မွဲသူတို့ကြားမှာ ဆရာတစ်ပါးအဖြစ်ကား ထင်ရှားလှပေ၏ သို့သော်ကား အနှစ်သာရပြည့်ဝသူကားမဟုတ်ပေ ။ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူတိုင်းကို ဆင်းရဲဒုက္ခသာပေးပေလိမ့်မည် ။ဒုက္ခဖြင့်သာ သုခကိုရနိုင်သည်ဟု ဆုံးမနေသောကြောင့်ပေတည်း ။
၆။ သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တ၏ အယူဝါဒကို ကြည့်ပြန်ပါကလည်း ..
''တစ်ပါးသော လောက ရှိသလောဟု (သင်) ငါ့ကို မေးသော် တစ်ပါးသော လောကရှိ၏ဟု ငါအယူရှိခဲ့လျှင် တစ်ပါးသော လောကရှိ၏ဟု သင့်အား ငါဖြေရာ၏၊ (သို့ရာတွင်) ဤသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ ထိုသို့ဟုလည်း ငါမယူ၊ အခြားသို့ဟုလည်း ငါမယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်ဟုလည်း ငါမယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်သည် မဟုတ်ဟုလည်း ငါမယူ။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ရှိသည်လည်း မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်သလောဟု (သင်) ငါ့ကိုမေးသော်
သတ္တဝါသည် သေပြီးသည့်နောက်၌ ရှိသည်လည်း မဟုတ် မရှိသည်လည်း မဟုတ်ဟုငါ အယူရှိခဲ့လျှင် သတ္တဝါသည် သေပြီးသည့်နောက်၌ ရှိသည်လည်း မဟုတ် မရှိသည်လည်း မဟုတ်ဟုသင့်အား ငါ ဖြေရာ၏၊ (သို့ရာတွင်) ဤသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ ထိုသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ အခြားသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်ဟုလည်း ငါ မယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်သည် မဟုတ်ဟု လည်း ငါမယူ''ဟု ပြောဆိုလိုက်ပါတဲ့။
ထိုအကြောင်းကို အဇာတသတ်ဘုရင်က မြတ်စွာဘုရားအား ပြန်လည်လျှောက်ကြးရင် ………
အသျှင်ဘုရား ကိုယ်တိုင် သိမြင်ရသော ရဟန်းဖြစ်ကျိုးကို မေးပါလျက် သဉ္စယဗေလဋ္ဌ ပုတ္တသည်အကျွန်ုပ်အား ဤသို့ ''ပစ်လွှင့်သော အယူ'' ကို ဖြေကြားပါ၏၊ အသျှင်ဘုရား သရက်ပင်ကို မေးပါလျက့်တောင်ပိန္နဲပင်ကို ဖြေသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ တောင်ပိန္နဲပင်ကို မေးပါလျက် သရက်ပင်ကိုဖြေသကဲ့သို့လည်းကောင်း ဤအတူ ကိုယ်တိုင် သိမြင်ရသော ရဟန်းဖြစ်ကျိုးကို မေးပါလျက် သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တသည် အကျွန်ုပ်အား ပစ်လွှင့်သော အယူကို ဖြေကြားပါ၏၊
ဟု သုံးသပ်ချက်ကိုပါ ဘုရားရှင်အား လျောက်ထားခဲ့ပေ၏။ ယင်းဆရာသည်လည်း မိမိဘာတစ်ခုမှမဖြဆိုနိုင်သဖြင့် စကားလှီးလွှဲကာ ဝှေ့ဝိုက်ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည် ။ အကျင့်တရားဆိုသည်မှာလည်း ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက် ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးမှသာ အမှန်ကန်ဆုံးလမ်းကို ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါလား ။ မိမိကိုယ်တိုင်က ၀ါးတားတားဖြင့် လမ်းညွှန်လမ်းပြလုပ်စားနေလျှင် လမ်းမှန်ရောက်လိုလို့ အားကိုးမိကာမှ လမ်းမှားပို့သူနှင့်တိုးကြရပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဆရာအတင်မှားက အပါယ်လားနိုင်သည်ဟု ဆုံးမခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလား ။
တိတ္ထိများနဲ့ ဘုရားသာသနာဆိုတော့ တိတ္ထိများအကြောင်းကတော့ ရှင်းပြပြီးပါပြီး ဘုရားသာသနာအကြောင်းဆက်ကြဦးစို့ ။
ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုိတဲ့ ရှင်နေမင်းကြီးထွန်းပလာတဲ့အခါမှာတော့ တိတ္ထိတို့အယူအဆအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ မှောင်ထုကလွင့်ပျောက်သွားရပါတယ် ။ တကယ်ကလည်း မီးနဲ့ရေလို သူတို့တစ်တွေက လောကကိုလောင်မြိုက်မှုပေးနေ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတာကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက စစ်မှန်တဲ့သစ္စာတရားများကို ထုတ်ဖော်ဟောကြားကာ ယင်းတို့အမှားကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါလား ။ ဘုရင့်တပ်မတော်ကြီးချီလာတော့ တောတွင်းတစ်နေရာမှာ ခိုဝင်ပုန်းအောင်းနေကြရသလို မျက်နှာပင်မဖော်ဝံ့ကြတော့ပါဘူး ။ တစ်ခါတစ်လေ ဘုရားရှင်နှင့်ဝါဒရေးရာ ထထပြိုင်ပေမယ့် ။ပြိုင်တိုင်းအရှုံးနဲ့တိုးလို့ သုန္ဓရီပရိဗိုဇ်မနဲ့ တောင် ယိုးစွပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသေးမဟုတ်ပါလား ။
ဘုရားရှိစဉ်ကာလက ခေါင်မဖော်ဝံ့ခဲ့ကြပေမယ့် သာသနာနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒတွေကို မိမိတို့ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့တရားတော်တွေအတွင်း ထည့်သွင်းကာ ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားလာကြပြန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ရေးသားတင်ပြထားပြီးဖြစ်တဲ့ ညီညွှတ်ကြပါ များသံဃာ ပို့စ်များမှာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။
ဒါဆိုရင်ရောအရှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားက သူ့အယူဝါဒကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံဟောပြောဝန်ခံခဲ့ပါသလဲဆိုတာ အနည်းငယ်သိသာစေရန် ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်လာ ဝေရဉ္ဇာပုဏ္ဏားနှင့်ဘုရားရှင်ဆွေးနွေးခန်းကိုထုတ်နှုတ်တင်ပြပါဦးမည်။
၂။ ထိုအခါ ဝေရဉ္ဇပုဏ္ဏားသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားနှင့် အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆို၏။ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ် စကားကို ပြောဆို ပြီးဆုံးစေ၍တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်ပြီးသော် ဝေရဉ္ဇပုဏ္ဏားသည် မြတ်စွာဘုရားအား -
''အသျှင်ဂေါတမ ဤစကားကို အကျွန်ုပ် ကြားဖူးပါသည်၊ ရဟန်းဂေါတမသည် အိုကုန်သော ကြီးကုန်သော ရင့်ကုန်သော ရှေးမီကုန်သော အဆုံးအရွယ်သို့ ရောက်ကုန်သော ပုဏ္ဏားတို့ကို ရှိလည်း မခိုးခရီးဦးလည်း မကြို ထိုင်ရန်နေရာဖြင့် ဖိတ်လည်း မဖိတ်ဟု ကြားဖူးပါသည်။ အသျှင်ဂေါတမ ထို (အကျွန်ုပ်ကြားဖူးသော စကား) သည် ထို (ကြားဖူးသည့်) အတိုင်း မှန်သည်သာတည်း၊ အသျှင်ဂေါတမသည် အိုကုန်သော ကြီးကုန်သော ရင့်ကုန်သော ရှေးမီကုန်သော အဆုံးအရွယ်သို့ ရောက်ကုန်သော ပုဏ္ဏားတို့ကို ရှိလည်းမခိုး ခရီးဦးလည်း မကြို ထိုင်ရန် နေရာဖြင့် ဖိတ်လည်း မဖိတ်၊ အသျှင်ဂေါတမ ထို (ရှိခိုးခြင်းစသည်ကို မပြုခြင်း) သည် မသင့်လျှော်သည်သာလျှင်တည်း''ဟု လျှောက်၏။
ပုဏ္ဏား နတ်နှင့်တကွသော မာရ်နတ်နှင့်တကွသော ဗြဟ္မာနှင့်တကွသော ဤသြကာသလောက၌လည်းကောင်း၊ သမဏဗြာဟ္မဏနှင့်တကွသော မင်းများ လူများနှင့်တကွသော ဤသတ္တလောက၌လည်းကောင်း ငါသည် ရှိခိုးလည်း ရှိခိုးထိုက် ခရီးဦးလည်း ကြိုထိုက် ထိုင်ရန်နေရာဖြင့် ဖိတ်လည်း ဖိတ်ထိုက်သောသူကို မြင်တော်မမူ၊ ပုဏ္ဏား အကြင်သူကို ငါသည် ရှိခိုးမူလည်း ရှိခိုးငြားအံ့၊ ခရီးဦးမူလည်းကြိုငြားအံ့၊ ထိုင်ရန်နေရာဖြင့် ဖိတ်မူလည်း ဖိတ်ငြားအံ့၊ ထိုသူ၏ ဦးခေါင်းသည်လည်း ပြတ်ကျရာ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၃။ အသျှင်ဂေါတမသည် အရသာကင်းသော သဘောရှိ၏ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် အရသာ ကင်းသောသဘောရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏား ရူပါရုံ သဒ္ဒါရုံ ဂန္ဓာရုံ ရသာရုံ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့၌ သာယာခြင်း အရသာတို့ကို မြတ်စွာဘုရားသည် ပယ်ပြီးပြီ၊ (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးပြီ၊ (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ နောင်အခါ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိကုန်ပြီ။ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် အရသာကင်းသော သဘောရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၄။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိ''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိ''ဟု ငါ့ကိုပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏား ရူပါရုံသဒ္ဒါရုံ ဂန္ဓာရုံ ရသာရုံ ဖောဋ္ဌဗ္ဗရုံတို့၌ သုံးဆောင်ခြင်းတို့ကို မြတ်စွာဘုရားသည် ပယ်ပြီးပြီ၊ (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးပြီ၊ အသစ်မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ နောင်အခါ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိကုန်ပြီ။ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် သုံးဆောင်ခြင်းမရှိ''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်း (ဟု မိန့်တော်မူ၏)။
၅။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော အယူ 'အကိရိယဝါဒ' ရှိ၏''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော အယူ'အကိရိယဝါဒ' ရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း၊
ပုဏ္ဏား ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့် ပြုသောမကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း မပြုထိုက်ဟု ဟော၏၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို မပြုထိုက်ဟု ဟော၏၊ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော အယူ 'အကိရိယဝါဒ' ရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ သင့် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၆။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် ဖြတ်အပ်၏ဟူသော အယူ 'ဥစ္ဆေဒဝါဒ' ရှိ၏''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်း ပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖြတ်အပ်၏ဟူသော အယူ'ဥစ္ဆေဒဝါဒ' ရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏား ငါသည် ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့ကို ဖြတ်အပ်သည်ကို ဟော၏။ များပြားသောယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြတ်အပ်သည်ကို ဟော၏။ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့်''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖြတ်အပ်၏ဟူသော အယူ 'ဥစ္ဆေဒဝါဒ' ရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၇။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် စက်ဆုပ်ခြင်းသဘော ရှိ၏''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် စက်ဆုပ်ခြင်းသဘော ရှိ၏''ဟုငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏားငါသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသောမကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့သို့ ရောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း စက်ဆုပ်တော်မူ၏၊ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် စက်ဆုပ်ခြင်းသဘော ရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၈။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် ဖျက်ဆီးတတ်၏''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖျက်ဆီးတတ်၏''ဟု ငါ့ကိုပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏား ငါသည်ရာဂကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါသကိုလည်းကောင်း၊ မောဟကိုလည်းကောင်း ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ တရားကိုဟော၏။ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ တရားကို ဟော၏။ ပုဏ္ဏားဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖျက်ဆီးတတ်၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆို နိုင်ရာ၏၊ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၉။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် ပူပန်စေတတ်သော သဘောရှိ၏''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပူပန်စေတတ်သော သဘောရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏား ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' ကိုလည်းကောင်း၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကိုလည်းကောင်း ပူပန်စေတတ်သော တရားတို့ဟူ၍ ဟော၏။ ပုဏ္ဏား ပူပန်စေတတ်၍ ယုတ်ညံ့ကုန်သောအကုသိုလ်တရား တို့ကို ပယ်ပြီးသော (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ဖြတ်ပြီးသော (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာ ကဲ့သို့ ပြုပြီးသော (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးသော နောင်အခါ၌ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိသော သူကို ပူပန်စေတတ်သော အကျင့်ရှိသူဟု ငါဟော၏။ ပုဏ္ဏားမြတ်စွာဘုရားသည် ပူပန်စေတတ်သော ယုတ်ညံ့ သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်ပြီးပြီ၊ (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးပြီ၊ (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ နောင်အခါ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိကုန်ပြီ။ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့်''ရဟန်းဂေါတမသည် ပူပန်စေတတ်သော သဘောရှိ၏''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁ဝ။ ''အသျှင်ဂေါတမသည် နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းငှါ မထိုက်''ဟု (ပုဏ္ဏားက ဆို၏)။
ပုဏ္ဏား အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းငှါမထိုက်''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိသည်သာလျှင်တည်း။
ပုဏ္ဏား နောင် တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်းကို ပယ်ပြီးသော (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးသော (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးသော (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကိုပြုပြီးသော နောင်အခါ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိသောသူကို ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်း၏ဟု ငါဟော၏၊ ပုဏ္ဏား မြတ်စွာဘုရားသည် နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်းကို ပယ်ပြီးပြီ။ (အဝိဇ္ဇာတဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးပြီ၊ (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ နောင်အခါ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိကုန်ပြီ၊ ပုဏ္ဏား ဤနည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းငှါ မထိုက်''ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ သင် (ပုဏ္ဏား) ရည်ရွယ်ပြောဆိုသော နည်းပရိယာယ်မျိုးကား (ငါတို့၌) မရှိသည် သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)
အင်္ဂုတ္တိုရ် အဋ္ဌကနိပါတ် ပဌမပဏ္ဏသက မဟာဝဂ် သီဟသုတ်မှာလည်း သီဟစစ်သူကြီးက.
နိဂဏ္ဌအား ''အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် ရဟန်းဂေါတမကို ဖူးမြော်ရန် ချဉ်းကပ်ခြင်းငှါ အလိုရှိပါ၏''ဟု ပြောဆို၏။ သီဟ အဘယ့်ကြောင့် သင်သည် ပြုထိုက်၏ဟူသော 'ကိရိယဝါဒ' အယူရှိလျက် မပြုထိုက်ဟူသော 'အကိရိယဝါဒ' အယူရှိသော ရဟန်းဂေါတမကို ဖူးမြော်ရန် ချဉ်းကပ်လိုဘိသနည်း၊ သီဟ ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟု 'အကိရိယဝါဒ' အယူရှိ၏၊ မပြုစိမ့်သောငှါ တရားကို ဟော၏၊ ထို (အကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့် တပည့်တို့ကို ဆုံးမ၏ဟု ပြောဆိုကာ အကြိမ်ကြိမ်တားမြစ်လေ၏။
သို့သော် သီဟစစ်သူကြီးအား ''ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် စင်စစ် ဧကန် ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော ဘုရားဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သာလျှင် အလွန်ကျော်စော ထင်ရှားကုန်သော ဤလိစ္ဆဝီမင်းတို့သည် မင်းကွန်း၌ အတူနေ အတူ စည်းဝေးကုန်လျက် များစွာသော အကြောင်းဖြင့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ကို ပြောဆိုကုန်၏၊ တရားတော်၏ ဂုဏ်ကို ပြောဆိုကုန်၏၊ သံဃာတော်၏ ဂုဏ်ကို ပြောဆိုကုန်၏။
ပန်ကြားသည်ဖြစ်စေ မပန်ကြားသည်ဖြစ်စေ ဤနိဂဏ္ဌတို့သည် အသို့ပြုနိုင်ကုန်အံ့နည်း၊ ငါသည် နိဂဏ္ဌတို့ကို မပန်ကြားဘဲသာလျှင် ပူဇော် အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော ထိုမြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရန် ချဉ်းကပ်ရမူ ကောင်းရာ၏''ဟု အကြံဖြစ်၏။ ထို့နောက် သီဟစစ်သူကြီးသည် နေမွန်းလွဲအခါ ရထားငါးရာတို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရန် ဝေသာလီပြည်မှ ထွက်လေ၏၊ ယာဉ်ဖြင့် သွားနိုင်သမျှသော အရပ်တိုင်အောင် ယာဉ်ဖြင့် သွား၍ ယာဉ်မှ သက်ပြီးသော် ခြေကျင်သာလျှင် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ ရှိခိုးလျက် တစ်ခုသောနေရာ၌ ထိုင်ကာ မြတ်စွာဘုရားအား-
''အသျှင်ဘုရား 'ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော 'အကိရိယဝါဒ' အယူရှိ၏၊ မပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (အကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ကြားရဖူးပါသည်၊ အသျှင်ဘုရား အသို့ပါနည်း၊ 'ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော 'အကိရိယဝါဒ' အယူရှိ၏၊ မပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (အကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်တို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ဆိုသော ထိုသူတို့ သည် မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပင် ပြောဆိုကြသည်ဟုတ်ပါ၏လော၊ မြတ်စွာဘုရားကို မဟုတ်မမှန်သော စကားဖြင့် စွပ်စွဲရာ မရောက်ဘဲ ရှိပါကုန်၏လော၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောသော တရားကိုပင် တစ်ဆင့်ဟောကြားကြသည် ဟုတ်ပါ၏လော၊ (မြတ်စွာဘုရား၏) မူလရင်းစကားနှင့် (ထိုသူတို့၏) တစ်ဆင့်ပြောသော စကားသည် ကဲ့ရဲ့ဖွယ်အကြောင်း လုံးဝ ကင်းပါ၏လော၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်ကား မြတ်စွာဘုရားကို စွပ်စွဲရန် အလိုမရှိကြပါ''ဟု လျှောက်၏။
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော 'အကိရိယ ဝါဒ' အယူရှိ၏၊ မပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (အကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၁)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပြုထိုက်၏ဟူသော 'ကိရိယ ဝါဒ' အယူရှိ၏၊ ပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (ကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၂)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖြတ်အပ်၏ဟူသော 'ဥစ္ဆေဒ ဝါဒ' အယူရှိ၏၊ ဖြတ်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (ဥစ္ဆေဒဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၃)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် စက်ဆုပ်ခြင်းသဘော ရှိ၏၊ စက်ဆုပ်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆို လိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၄)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖျက်ဆီးတတ်၏၊ ဖျက်ဆီး စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၅)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပူပန်စေတတ်သော အကျင့် ရှိ၏၊ ပူပန်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၆)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်း၏၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်းစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၇)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် သက်သာရာကို ရှာတတ်၏၊ သက်သာရာကို ရှာစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏၊ ထိုသို့သော နည်းပရိယာယ်မျိုးသည် ရှိ၏။ (၈)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော 'အကိရိယ ဝါဒ' အယူရှိ၏၊ မပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (အကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်'၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်'၊ စိတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' ကို မပြုထိုက်ဟု ဟော၏၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို မပြုထိုက်ဟု ဟော၏၊ သီဟ ဤသို့သော နည်းပရိယာယ် အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် မပြုထိုက်ဟူသော 'အကိရိယဝါဒ' အယူရှိ၏၊ မပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (အကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၁)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပြုထိုက်၏ဟူသော 'ကိရိယ ဝါဒ' အယူရှိ၏၊ ပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (ကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော ကောင်းသော အကျင့် 'ကာယသုစရိုက်'၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသော ကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီသုစရိုက်'၊ စိတ်ဖြင့် ပြုသော ကောင်းသော အကျင့် 'မနောသုစရိုက်' ကို့ပြုထိုက်၏ဟု ဟော၏၊ သီဟ ဤသို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပြုထိုက်၏ဟူသော 'ကိရိယဝါဒ' အယူရှိ၏၊ ပြုစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (ကိရိယဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့် သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၂)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖြတ်အပ်၏ဟူသော 'ဥစ္ဆေဒ ဝါဒ' အယူရှိ၏၊ ဖြတ်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (ဥစ္ဆေဒဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့ကို ဖြတ်အပ်သည်ကို ဟော၏၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြတ်အပ်သည်ကို ဟော၏၊ သီဟ ဤသို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်း ဂေါတမသည် ဖြတ်အပ်၏ဟူသော 'ဥစ္ဆေဒဝါဒ' အယူရှိ၏၊ ဖြတ်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထို (ဥစ္ဆေဒဝါဒ) တရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် စက်ဆုပ်ခြင်း သဘောရှိ၏၊ စက်ဆုပ်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆို လိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်'၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်'၊ စိတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' မှ စက်ဆုပ်၏၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့သို့ ရောက်ခြင်းမှ စက်ဆုပ်၏၊ သီဟ ဤသို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် စက်ဆုပ်ခြင်း သဘောရှိ၏၊ စက်ဆုပ် စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၄)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖျက်ဆီးတတ်၏၊ ဖျက်ဆီး စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် ရာဂ ဒေါသ မောဟကို ဖျက်ဆီးစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ များပြားသော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖျက်ဆီးစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ သီဟ ဤသို့သော နည်း ပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ဖျက်ဆီးတတ်၏၊ ဖျက်ဆီးစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရား ဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၅)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပူပန်စေတတ်သော သဘော ရှိ၏၊ ပူပန်စိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပူပန်စေတတ်၏ဟု ဟော၏၊ ကိုယ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်'၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်'၊ စိတ်ဖြင့် ပြုသော မကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' ကို ပူပန်စေတတ်၏ဟု ဟော၏။ သီဟ ပူပန်စေတတ်၍ ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်ပြီးသော၊ (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးသော၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုပြီးသော၊ (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးသော၊ နောင်တစ်ဖန် ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိလေသာတို့ကို ပူပန်စေတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ငါ ဟော၏။ သီဟ မြတ်စွာဘုရားသည် ပူပန်စေတတ်သော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်ပြီးပြီ၊ (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို ဖြတ်ပြီးပြီ၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုပြီးပြီ၊ (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ နောင်အခါ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိကုန်ပြီ၊ သီဟ ဤသို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပူပန်စေတတ်သော သဘောရှိ၏၊ ပူပန်စိမ့်သောငှါ တရား ဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကိုဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၆)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်း၏၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်းစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း တစ်ဖန်ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်းကို ပယ်ပြီးသော (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ)
အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးသော (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုပြီးသော (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးသော နောင်အခါ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်း၏ဟု ငါဟော၏။ သီဟ မြတ်စွာဘုရားသည် နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်းကို ပယ်ပြီးပြီ၊ (အဝိဇ္ဇာ တဏှာ) အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ (နုတ်ပြီးသော) ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုပြီးပြီ၊ (အသစ်) မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ နောင်အခါ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိကုန်ပြီ၊ သီဟ ဤသို့သော နည်းပရိယာယ် အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်း၏၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ ကင်းစိမ့်သောငှါ တရား ဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၇)
သီဟ အကြင်သို့သော နည်းပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် သက်သာရာကို ရှာတတ်၏၊ သက်သာရာကို ရစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာသော အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
သီဟ ငါသည် မြတ်သော (မဂ်ဖိုလ်ဟူသော) သက်သာခြင်းဖြင့် သက်သာရာကို ရှာ၏၊ သက်သာ ရာကို ရစိမ့်သောငှါ တရားဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏။ သီဟ ဤနည်း ပရိယာယ်အားဖြင့် ''ရဟန်းဂေါတမသည် သက်သာရာကို ရှာ၏၊ သက်သာရာကို ရစိမ့်သောငှါ တရား ဟော၏၊ ထိုတရားဖြင့်လည်း တပည့်သားတို့ကို ဆုံးမ၏'ဟု ငါ့ကို ပြောဆိုလိုမူ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ (၈)
ဤသို့ ဟောတော်မူသော် သီဟစစ်သူကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားကို ''အသျှင်ဘုရား (တရားတော် သည်) အလွန်နှစ်သက်ဖွယ် ရှိပါပေ၏၊ အသျှင်ဘုရား (တရားတော်သည်) အလွန်နှစ်သက်ဖွယ် ရှိပါ ပေ၏။ပ။ မြတ်စွာဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ကို ယနေ့မှစ၍ အသက်ထက်ဆုံး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တတ်သော ဥပါသကာဟူ၍ မှတ်တော်မူပါဟု (လျှောက်၏)။
သီဟ စူးစမ်းဆင်ခြင်၍ ပြုလော့၊ သင်တို့ကဲ့သို့ ထင်ရှားကျော်စောသော သူတို့အား စူးစမ်း ဆင်ခြင်၍ ပြုခြင်းသည် ကောင်း၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ကို ''သီဟ စူးစမ်းဆင်ခြင်၍ ပြုလော့၊ သင်တို့ကဲ့သို့ ထင်ရှားကျော်စောသော သူတို့အား စူးစမ်းဆင်ခြင်၍ ပြုခြင်းသည် ကောင်း၏''ဟု မိန့်တော်မူ၏၊ ဤစကားဖြင့်လည်း အကျွန်ုပ်သည် မြတ်စွာဘုရားအား အတိုင်းထက် အလွန် ဝမ်းမြောက်ပါ၏၊ နှစ်သက်ပါ၏။ အသျှင်ဘုရား တစ်ပါးသော အယူရှိသော တိတ္ထိတို့သည် အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော တပည့်ကို ရခဲ့သော် ''သီဟစစ်သူကြီးသည် ငါတို့၏ တပည့်အဖြစ်သို့ ရောက်၏''ဟု နှလုံးသွင်းကာ ဝေသာလီ တစ်ပြည်လုံးကို တံခွန်အောင်လံ စိုက်ထောင်ကုန်ရာ၏၊ ထိုသို့ ဖြစ်ပါလျက်လည်း မြတ်စွာဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ကို ''သီဟ စူးစမ်းဆင်ခြင်၍ ပြုလော့၊ သင်တို့ကဲ့သို့ ထင်ရှားကျော်စောသော သူတို့အား စူးစမ်း ဆင်ခြင်၍ ပြုမှုသည် ကောင်း၏''ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အသျှင်ဘုရား ထိုအကျွန်ုပ်သည် နှစ်ကြိမ်မြောက် လည်း မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ တရားတော်ကိုလည်း ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ သံဃာတော်ကိုလည်း ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ကို ယနေ့မှစ၍ အသက်ထက်ဆုံး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တတ်သော ဥပါသကာဟူ၍ မှတ်တော်မူပါဟု (လျှောက်၏)။
ဤအထက်ပါ ဝေရဉ္ဇာပုဏ္ဏားကြီးနှင့် သီဟစစ်သူကြီးတို့ ဘုရားရှင်နှင့်ဝါဒရေးရာဆွေးနွေးခန်းကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လျှင်ပင်
ဘုရားရှင်၏ ၀ါဒမှာ သင့်မသင့် မှန်မမှန် ခွဲခြားဝေဖန်ပြိးမှ အကျိုးရှိ မှန်ကန်သောတရားကိုသာ လက်ခံကျင့်သုံးရသော ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒဖြစ်ကြောင်း သိသာလှပေ၏ ။
အထက်ကဖော်ပြခဲ့သော် တိတ္ထိဆရာအမျိုးမျိုးတို့၏ အယူဝါဒတို့မှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာကိုပေးနိုင်တဲ့ အားတိုးဆေးကဲ့သို့၎င်း ၊အရသာချိမြိန်သယောင်ယောင်နဲ့ အသက်ဇီဝိန်ပါ ဆောင်ယူသွားမယ့် သေဆေးအဆိပ်ကဲ့သို့၎င်း အကျိုးမဖက် ဆိုးကျိုးသက်သက်သာဖြစ်စေနိုင်လေ၏ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အယူဝါဒကား အဖြူနှင့် အမည်းပမာ ယင်းတို့နှင့်ဆန့်ကျင်စွာ မိမိကိုယ်ကိုယ်အားကိုးကာ ဒါန သီလ ဘာဝနာကုသိုလ်တရားများကြိုးစားအားထုတ်ရသည့် မွန်မြတ်လှသည့် ဘာသာတစ်ခုသာဖြစ်ပေ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတော်မူသော ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်မှ ဘယ်တရားကိုမျှ လောကလူသားတို့အတွက် အကျိုးမပြီး အချီးနှီးသာဖြစ်သည်ဟု အပြစ်ရှာထောက်ပြဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြပေ ။ သို့ကြောင့်ပင် တိတ္ထိတို့ခများ နေမင်းကြီးထွန်းလင်းတောက်ပလာတဲ့အခါ အမှောင်တွေကွယ်ပျောက်ရသည့်ပမာ မထင်မရှားဖြင့်သာ မသိနားမလည်သူများအား စည်းရုံးသိမ်းသွင်းကာ ၀မ်းစာရှာခဲ့ကြရပေတော့၏ ။ သို့သော် ကျွန်ုပ် စိုးရိမ်မိသည်မှာ ဘုရားသာသနာတော်နောက်ပိုင်းရောက်လေ စပါးခင်းတဲ့ ပေါင်းပင်ပေါက်သကဲ့သို့ ယောယောင်ဝင်ရောက်ကာ ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားကြမည်ကိုသာတည်း ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များမှာ အသိညာဏ်ရင့်ကျက်သူ မည်သူမဆို လက်ခံနိုင်ကြမည်သာဖြစ်၏ ။ သို့သော် "လူမိုက်တိရစ္ဆာန် နိဗ္ဗာန်စကား အလွန်ခါး၏" ဆိုတဲ့အတိုင်း လူမိုက်လူ့ဗာလများအတွက်ကတော့ မိုက်ချင်တိုင်းမိုက်မရ ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးမရ အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြသော ဘာသာဖြစ်သဖြင့် တဇောင်းစေးနှင့် မျက်ချေး သဖွယ်သာ အရသာတစ်စုံတရာမဖက်ပဲ အခါးသီးဆုံးတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေမှာကတော့အသေချာပင်။ ထို့ကြောင့်ပင် သာသနာပများက မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကွယ်သွားပါပြီဟု ၀ါဒဖြန့်ကာ နေမင်းကြီးကွယ်ပဖို့ တောင်းတခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါလား .......
ဘုရားလက်ထက်တော်အခါက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်သုဓမ္မသည် စိတ္တသူကြွယ်၏ ဒေသစာရီကြွရောက်လာသော အရှင်သာရိပုတ္တရာ အရှင်မောဂ္ဂလာန်နှင့်တကွသော သံဃာတော်များအား ဆွမ်းပင့်ကပ်ခြင်းအပေါ်၌ မလိုတမာဖြစ်ကာ
ဆွမ်းစားနေစဉ်အိမ်သိုိ့ ကြွသွားပြီး ''သူကြွယ် သင် စီရင်ထားသော ဤခဲဖွယ်ဘောဇဉ်ကား များပြားလှပါပေ၏၊ သို့ရာတွင် ဤ(များပြား လှသော ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်) ၌ နှမ်းပျစ်မုန့် တစ်ခုကား မပါရှိချေ''ဟု အသျှင်သုဓမ္မက ပြောဆို၏။
(စိတ္တသူကြွယ်၏ အမျိုးရိုးသည် နှမ်းပျစ်မုန့်လုပ်ရောင်းပြီး ဆင်းရဲစွာအသက်မွေးခဲ့ရသည်ကို ရည်ရွယ်ပြောဆိုသည်)
အသျှင်ဘုရား များစွာသော ဘုရားစကားတော် ဖြစ်သော ရတနာများ ရှိပါလျက် အသျှင်ဘုရားသည် နှမ်းပျစ်မုန့်ဟူသော ရှားပါးသော စကားကိုသာလျှင် ပြောဆိုဘိ၏။
အသျှင်ဘုရား ရှေးက ဖြစ်ဖူးပါသည်၊ ဒက္ခိဏပထတိုင်းသား ကုန်သည်တို့သည် အရှေ့ဇနပုဒ်သို့ ကုန်သွယ်ရန် သွားပါကုန်၏၊ ထို ဒက္ခိဏပထတိုင်းသား ကုန်သည်တို့သည် အရှေ့ဇနပုဒ်မှ ဆောင်ယူလာ အပ်သော ကြက်မသည် ကျီးနှင့်အတူ ပေါင်းဖော်၍ ကြက်ငယ်ကို မွေးဖွားပါသည်၊ အသျှင်ဘုရား
(ရှေးအခါက သင်္ဘောခရီးဖြင့် ကုန်သွယ်သွားကြရာ ကမ်းကိုမှန်းဆကြည့်ရှုစေရန် ကျီးငှက်ကိုဖမ်းကာ သင်္ဘောတွင် အစာအတွက်ဆောင်ယူလာကြက်မနှင့်အတူထည့်ထားရာမှ ကြက်နှင့်ကျီး ပေါင်းဖော်၍မွေးလာသော ကာပြားကျီးဟူလို၊ ကမ်းကိုမှန်းဆသိနိုင်ရန် ကျီးကန်းကိုလွှတ်လိုက်ရာတွင် အရပ်မျက်နှာကို တွေ့လျှင်ယင်းကျီးကန်းသည် တန်း၍သာပျံသန်းလွတ်မြောက်သွားတော့၏ ၊ကမ်းကိုမမြင်မချင်း သင်္ဘောလင်းယဉ်တိုင်၌သာ အဖန်ဖန်ပျံဝဲလျှက်နားနေရသည် ဟူသတတ် )
ထိုကြက်ငယ်သည် ကျီးသံမြည်လိုသောအခါ 'အာအောက်ကလိ'ဟု မြည်ပါ၏၊ ကြက်သံတွန်လိုသောအခါ 'အောက်ကလိအာ'ဟု တွန်ပါ၏၊ အသျှင်ဘုရား ဤအတူပင် များစွာသော ဘုရားစကားတော်ဖြစ်သော ရတနာများ ရှိပါလျက် အသျှင်ဘုရားသည် နှမ်းပျစ်မုန့်ဟူသော ရှားပါးသော စကားကိုသာလျှင် ပြော ဆိုဘိ၏ဟု (လျှောက်၏)။
''သူကြွယ် သင်သည် ငါ့ကို ဆဲရေး၏၊ သူကြွယ် သင်သည် ငါ့ကို ရေရွတ်၏၊ သူကြွယ် ဤကျောင်းသည် သင်၏ ကျောင်းတည်း၊ ငါ ဖဲသွားတော့အံ့''ဟု (ပြောဆို၏)။
အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် အသျှင်ဘုရားကို မဆဲရေးပါ၊ မရေရွတ်ပါ၊ အသျှင်ဘုရား အသျှင်ဘုရားသည် မစ္ဆိကာသဏ္ဍဇနပုဒ်အနီး ပျော်မွေ့ဖွယ်ကောင်းသော ဝှေးပင်ဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ ပါလော့၊ တပည့်တော်သည် အသျှင်ဘုရားအား သင်္ကန်း ဆွမ်း ကျောင်း သူနာ၏ အထောက်အပံ့ဖြစ်သော ဆေးပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တို့ ဖြင့် အားထုတ်ပါအံ့ဟု (လျှောက်၏)။
နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း။ပ။ သုံးကြိမ်မြောက်လည်း အသျှင်သုဓမ္မသည် စိတ္တသူကြွယ်ကို ''သူကြွယ် သင်သည် ငါ့ကို ဆဲရေး၏၊ သူကြွယ် သင်သည် ငါ့ကို ရေရွတ်၏၊ သူကြွယ် ဤကျောင်းသည် သင်၏ ကျောင်းတည်း၊ ငါဖဲသွားတော့အံ့''ဟု (ပြောဆို၏)။
''အသျှင်ဘုရား အသျှင်ဘုရားသည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားမည်နည်း''ဟု (မေးလျှောက်၏)။
''သူကြွယ် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရန် သာဝတ္ထိပြည်သို့ ငါသွားမည်''ဟု (ပြော၏)။
''အသျှင်ဘုရား သို့ ဖြစ်လျှင် အသျှင်ဘုရားနှင့် တပည့်တော် ပြောအပ်သမျှ စကားအလုံးစုံကို့မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ကြားပါလေ၊ အသျှင်ဘုရား အသျှင်ဘုရားသည် မစ္ဆိကာသဏ္ဍဇနပုဒ်သို့ တစ်ဖန် ပြန်လာရသည်မှာအံ့သြဖွယ်မဟုတ်ပါ''ဟု (လျှောက်၏)။
၃၅။ ထိုအခါ အသျှင်သုဓမ္မသည် ကျောင်း အိပ်ရာ နေရာကို သိုမှီးသိမ်းဆည်း၍ သပိတ်သင်္ကန်းကို ယူပြီးလျှင် သာဝတ္ထိပြည်သို့ ဖဲသွားလေ၏၊ အစဉ်အတိုင်း သွားလေသော် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ် သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်းတော် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုး ပြီးလျှင် တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေကာ မိမိနှင့် စိတ္တသူကြွယ် ပြောအပ်သမျှ စကားအလုံးစုံကို မြတ်စွာ ဘုရားအား လျှောက်၏။
(မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား မလျောက်ပတ် မလျော်ကန် မသင့်တင့်၊ ရဟန်းတို့၏ အပြုအမူ မဟုတ်၊ မအပ်၊ မပြုသင့်။
(မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား သင်သည် သဒ္ဓါတရားရှိသော ကြည်ညိုသော လှူဒါန်းတတ်သော (ဝေယျာဝစ္စကို) ပြုလုပ်တတ်သော သံဃာကို လုပ်ကျွေးတတ်သော စိတ္တသူကြွယ်ကို ယုတ်မာသော စကားဖြင့် အဘယ့်ကြောင့် ဆဲရေးဘိသနည်း၊ ယုတ်မာသော စကားဖြင့် ရှုတ်ချဘိသနည်း၊
(မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား ဤ(သင်ပြုမိသောအမှု) သည် မကြည်ညိုသေးသော သူတို့အား ကြည်ညို စေခြင်းငှါလည်းကောင်း။ပ။ ကဲ့ရဲ့တော်မူ၍။ပ။ တရားစကားကို ဟောတော်မူပြီးလျှင် ရဟန်းတို့ကို ရဟန်းတို့ သို့ဖြစ်လျှင် သံဃာသည် သုဓမ္မရဟန်းအား ''သင်သည် စိတ္တသူကြွယ်ကိုသည်းခံစေရမည်''ဟု ပဋိသာရဏီယကံကို ပြုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်ကား စူဠ၀ါ ကမ္မက္ခန္ဓက၌ လာရှိသော ကျောင်းတကာစိတ္တသူကြွယ်နှင့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်သုဓမ္မတို့အကြောင်းဖြစ်ပေ၏ ။ ယင်းဇာတ်လမ်းမှ စိတ္တသူကြွယ်ပြောပြသော
ကြက်လည်းမကျ ကျီးလည်းမကျတဲ့ အောက်ကလိအာ အာကလိအောက် ဆိုတဲ့ ကာပြားကြက် အဲလေ ကာပြားကျီးခမျာမှာ အသံပီအောင် မတွန်နိုင် မအော်နိုင်ရှာပါဘူး ။
အခု ကိုးဘွဲ့ရ ဘုန်းကြီးလူထွက်ပါလို့ လိမ်ညာထားတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကလည်း ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာဖတ်မှာဖြင့်လည်း ခရစ်တော်အကြောင်း ဖတ်တာမဟုတ်ဘူး ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဒေသနာကိုဟောမှာဖြင့်လည်း နမောတဿလေးနဲ့ ဘုရားရှိခိုးပြီး တရားပွဲကိုစတာမဟုတ်ဘူး ၊တော်ကြာမှ http://www.facebook.com/note.php?note_id=179685132117981 ပို့စ်ထဲကတပည့်မိုက်လို ကျေးဇူးကန်းရာရောက်နေမှာစိုးလို့ပါ ။ ဟောပြပြန်တော့လည်း ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးတွေရော မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘောတွေရော သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ဒုလ္လဘံ တွေရော ပါဠိတွေကိုစုံလို့ ။ ခက်တာက ပါဠ်ိကလည်း မှန်ကန်စွာ ရွတ်မပြနိုင်ရှာတော့ အလွဲလွဲ အမှားမှားတွေချည်းကြားနေရတာပဲ ဒါ့ကြောင့် ပီအောင်မှန်ကန်အောင် မရွတ်နိုင်တဲ့ ကာပြားဓမ္မဆရာကိုိ အာကလိအောက်ပါကွာလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ် ။
“ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ”လို့ စာတန်းထိုးထားပေမယ့် စဖွင့်ကတည်းက ကြားနေရတာဖြင့် မှားယွင်းချွတ်ချော်နေတဲ့ဟောပြောရွတ်ဆိုမှုတွေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေထဲက ပါဠိတွေပါပဲ ။
သာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ ပါဠိတစ်လုံးရွတ်လိုက်လို့ လွဲနေတယ် မှားနေတယ်ဆိုတာ သိဖို့လွယ်ကူမှာမဟုတ်သလို ၊မှားနေပါတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အရှင်ဘုရားရယ် သူဆိုလိုချင်တဲ့ လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ရောက်သွားပြီးတာပါပဲ ဆိုပြီး သဘောထားကြီးပြတတ်ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အိမ်ဦးခန်းတက်ချေးပါတဲ့ ခွေးကို သည်းခံစိတ်မွေးပြီး ထမင်းတောင်ကျွှေးလွှတ်လိုက်ဘိသကဲ့သို့ ။ အလွဲအမှားတွေ လက်ခံရင်း လက်ခံရင်းနဲ့ သာသနာကွယ်သွားရမှာကိုိတော့ သူတို့နားမလည်ကြပါဘူး ။
အင်္ဂုတ္တိုရ် ပဉ္စကမှာ ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက သာသနာကွယ်ခြင်အကြောင်းတွေဟောကြားထားတာရှိပါတယ် ယင်းတို့ကို မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံဆရာတော်ကြီးက လူအမှားမှတ်သားရလွယ်ကူပြိး အထင်ကရသိသာစေရန်
“အက္ခရာပုဒ်ပျက်၊ လေ့ကျင့်သင်ကြ၊ ဒုဗ္ဗစမူ၊ စာချသူရှား၊ လာဘ်များအောင်ဖန်၊ ခိုက်ရန်ကွဲပြား၊ ဤငါးပါးသည်၊ ဘုရားသာသနာ ကွယ်ကြောင်းတည်း” လို့ ယင်းကဲ့သို့ ပုဒ် ပါဌ် အက္ခရာ တွေ အတ္ထယောဇနာတွေမှားယွင်းရွတ်ဖတ်ပြောဆိုတာဟာ မိမိတို့သာသနာကွယ်ပရခြင်းရဲ့ လမ်းစပဲလို နားလည်သဘောပေါက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ယင်းဓမ္မဆရာက ပါဠိများကို တမင်သက်သက်ဖျက်ဆိးလိုလို့ မှားရွတ်လေသလား မရပဲနဲ့ တတ်ယောင်ကားလုပ်ကာ အာကလိအောက်လုပ်နေသလားတော့မပြောတတ်ပါ ။မူကြိုကိုရင်ငယ်လေးများပင် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟပါဠိနဲ့ စသင်ခဲ့ကြရတာမို့
ဒေါသမူလာနိ စ ဒွိဓာ ။
မောဟမူလာနိ စ ဒွေတိ ၊
ဒွါဒသာ ကုသလာ သိယုံ။….. လို့ရွတ်ဆိုနိုင်ကြပါတယ် ။
ဒါကိုတောင်မှ ယင်းဓမ္ဓဆရာက မှန်အောင်မဆိုနိုင်ရှာတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဒွါဒသာကုသလာသိယုံကို ဒွါဒသ အကုသလာ သိယုံလို့ ဆိုလိုက်တာတွေ့ရပါတယ် ။ ယင်းသင်္ဂဟဂါထာက တစ်ပါဒလျှင်ရှစ်လုံးစီရှိရတဲ့ ရှစ်လုံးဖွဲ့ဂါထာမျိုးဖြစ်လို့ ဒွါဒသာကုသလာသိယုံလို့ ဆိုမှ ရှစ်လုံးအကိုက်ဖြစ်မှာပါ ဒွါဒသ အကုသလာ သိယုံလို့ခွဲထုတ်ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် အက္ခရာကလည်း ကိုးလုံးဖြစ်သွားပြီး ဆန်းဂိုဏ်းလည်းမကျတော့တာကြောင့် အက္ခရာပုဒ်ပျက်သွားတဲ့ ပညာရှိများကဲ့ရဲ့ဖွယ် ဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားရပါတယ် ။
နောက်ဂါထာကို အနက်ပေးပြရာမှာလည်း လောဘမူလာနိ-လောဘမူစိတ်ရှစ်ပါးတို့သည် ၊ သိယုံ-ဖြစ်ကုန်၏လို့ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ဆိုပြနေပြန်ပါတယ် ။ကိုရင်ငယ်လေးသွားပြိး အနက်ပေးခိုင်းရင်တောင်မှ ။ လောဘမူလာနိ- လောဘမူစိတ်တို့သည် ။ အဋ္ဌဓာ-ရှစ်ပါးအပြားရှိကုန်သည် ။ သိယုံ-ဖြစ်ကုန်၏ ။လို့ ကြောင်းကြောင်းပြေး အနက်ပေးပြနိုင်ပါလိမ့်ဦးမယ် ။
ပါဠိတွေကို ထင်ရာလျှောက်ရွတ်ဆိုဖျက်ဆီးနေရုံတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပြန်ဘူး ။ “ချစ်သူတို့ လောကကြီးထဲမှာ အသက်ရှင်ပြီး နေထိုင်သွားလာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတဲ့အခါကာလမှာ လောဘရယ် ဒေါသရယ် မောဟရယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကို အကိုသိုလ်တွေက လူ့ရဲ့အဇ္ဈတ္တသန္တာန်မှာ အသက်ရှင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ် …လို့ဆိုနေပြန်ပါတယ် ။ စိတ်ဆိုတာက ဥပါဒ် ဌိ ဘင်ဆိုတဲ့ စိတ္တက္ခဏသုံးချက်စေ့တာနဲ့ ပျောက်ပျက်သွားရတာပါ ခန္ဓကိုယ်ထဲမှာ မပျက်မစီးပဲ အမြဲရှင်သန်တည်ရှိနေတဲ့ တရားဓမ္မရယ်လို့မရှိပါဘူး ယင်းသဘောတရားကတော့ ဘင်္ဂက္ခဏမရဏကို သေချာကျနအောင်သင်ယူလေ့လာဖူးမှ နားလည်သဘောကျနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိတို့သာသနာက အကုသိုလ်ဟာ ပဟာဗ္ဗ ပယ်သတ်အပ်တဲ့တရား ကုသိုလ်ဆိုိတာ ပဟာယက-ပယ်သတ်တတ်တဲ့တရား ကုသိုလ်ဆိုတာ စွမ်းအားကြီးမယ်တယ် လို့ညွှန်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေအမယ့် ယင်းဓမ္မဆရာက ”အကုသိုလ်တွေဆိုတာ များပြားလွန်းလို့ ဘယ်လိုမှရုန်းထွက်လို့မရနိုင်ဘူး” လို့လုပ်လာပြန်ပါတယ် ။
အပြစ်အကုသိုလ်တို့မှ ရုန်းထွက်ရမရ အင်္ဂုလိမာလမထေရ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါ ။လူသတ်ပြီး လက်ဖြတ်နေတဲ့ခိုးသူကြီးပဲ ဒါပေမယ့် အရဟတ္တမဂ်ဆိုတဲ့ မဂ်ကုသိုလ်နဲ့အပြီးတိုင်ပယ်သတ်လိုက်လို့ အကိုသိုလ်တွေဟာ မျိုးစေ့ဖျက်ဆိးခံလိုက်ရတဲ့ အသီးပမာ တဖန်အပင်ပေါက်လာဖို့ရာ မစွမ်းသာတော့ပါဘူး ။နောက် မိလက္ခ မုဆိုးကြီးတို့ ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါ ငရဲကျရောက်ရမည့် အကုသိုလ်ကလွတ်ခဲ့ကြတာ သူမှ နားမလည်တာလို့ပဲပြောရမှာပဲ ခက်တာက နားမလည်ပဲနဲ့ မလည်ရှုပ်ဝင်လုပ်နေလို့သာ အများအမြင်မေ၀၀ါးအောင် လိုက်ရှင်းနေရတာပါပဲ ။
မြတ်စွာဘုရားက ဘ၀င်လို့ခေါ်တဲ့ မိမိတို့ပင်ကိုယ်ပကတိစိတ်ဟာ အလွန်ဖြူစင်ပါတယ် ပြင်ပကအာရုံတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအပေါ်မှာ မသင့်တဲ့နှလုံးသွင်းမှု(အယောနိသောမနသိကာရ )ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟဆိုိတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့် ညစ်ညူးရတယ် ။ ယောနိသာမနသိကာရ အသင့်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာ ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့် ယင်းအညစ်အကြေးများတဖန်စင်ကြယ်ရ၏လို့ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် ဧကကနိပါတ် ပဟိဏိတအစ္ဆ၀ဂ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဟောပြတော်မူခဲ့ပါတယ် ။
၄၉။ ရဟန်းတို့ ဤ(ဘဝင်) စိတ်သည် ပြိုးပြိုးပြက် တောက်ပ၏၊ ထို စိတ်သည်ပင် (အကုသိုလ်ဇော ခဏ၌) ဧည့်သည်သဖွယ် ဖြစ်ကုန်သော ညစ်ညူးကြောင်း ကိလေသာတို့ကြောင့် ညစ်ညူးရ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၅ဝ။ ရဟန်းတို့ ဤ(ဘဝင်) စိတ်သည် ပြိုးပြိုးပြက် တောက်ပ၏၊ ထို စိတ်သည်ပင် (ကုသိုလ် ဇောခဏ၌) ဧည့်သည်သဖွယ် ဖြစ်ကုန်သော ညစ်ညူးကြောင်း ကိလေသာတို့မှ ကင်းလွတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
ဘုရားရှင်၏ ယင်းဒေသနာကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာကိုသင်ဖူးသူများမှာ ချက်ချင်းတန်းသဘောပေါက်နိုင်ကြပါတယ် ၊ ၀ီထိစိတ်များမဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တရားများမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဘူး ။ ဥပမာ အိမ်ပျော်နေတဲ့အခါ သူ့အသက်သတ်လို့ သတ်ခိုင်းလို့မရနိုင်သလို / လှုဒါန်းလို့ အလှုဒါန်းခိုင်းလို့မရပါဘူ ။ ဘုရားရှိခိုးခြင်း တရားနာခြင်း မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းကိုပင် ပြုလုပ်မရပါဘူး ။ကန်ရေပြင်ဟာ ညိမ်သက်နေသလို ဘ၀င်မနောအကြည်ဓာတ်ဟာလည်း အာရုံတစ်ပါးတို့နှင့်မရာနှောလျှင် အလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ စိတ်ကလေးပါ ။ အာရုံနှင့် ဒွါရထိခိုက်ရာအခါမှသာ ယောနိသောမနသိကာရရှိသူ၌ အကုသိုလ်တရားများဖြစ်ပေါ်လာကြပြီး ယောနိသောမနသိကာရရှိသူသန္တာန်၌ ကုသိုလ်တရားများဖြစ်လာရတာပါ ။
လောကလူတို့နားလည်အောင်ပြောပြရရင် ကလေးငယ်လေးတွေဟာ ပင်ကိုယ်ပကတိဖြူစင်တဲ့စိတ်ရှိသလား ယုတ်မာညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လေ့ရှိသလား စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ လူတိုင်းကလေးဘ၀ကဖြူစင်တယ်လို့ပြောကြတယ် ။ကလေးမှာက အယောနိသောမနသိကာရနည်တယ်
ဒီတော့ မြင်မြင်သမျှအာရုံအပေါ်မှာ တပ်မက်မှုမနှစ်သက်မှုတွေနည်းပါးပါတယ် ။ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျ စိတ်ကို သေချာကျန ဆုံးမထားတဲ့သူတွေမှာ မြင်မြင်သမျှ ကုသိုလ်ဓမ္မတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပြီး ၊မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ခြေမချနိုင်ကြတဲ့လူတွေမှာကျ မြင်မြင်သမျှ ကြားကြားသမျှစတဲ့အာရုံတွေဟာ အကုသိုလ်တရားများ စီးပွားဖို့ပဲဖြစ်လာရတာပါ ။
ဒါပေမယ့် ယင်းခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာက သဘာဝဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်စွာ ဘုရားဟောကိုဖီလာကန့်လန့်လုပ်ကာ “အဲဒီတော့ မိမိရဲ့ မွေးကတည်းကနေပြီးတော့ သေဆုံးတဲ့အချိန်ကာလသမယထိ ဒီလောဘ ဒေါသ မောဟဆိုတဲ့ အကုသိုလ်တရားတွေက ပါလာခဲ့တယ် ၊ အ်ိမ်တစ်အိမ်မှာ ပင်တိုင်နေထိုင်ပြီး အိမ်ပိုင်ရှင်က အဲဒီအိမ်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေသလို ၊ ရံဖန်ရံခါလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တော့ ဧည့်သည် ၊
အဲဒီလိုပဲ နှလုံးသားမှာ မွေးကတည်းကပါလာတဲ့တရားတွေက လောဘ ၊ဒေါသ မောဟဆိုတဲ့ အကုသိုလ်တရားတွေက ပါလာကြတော့ ဒီလောဘ ဒေါသ မောဟဆိုတဲ့ တရားတွေက အိမ်ရှင်ဖြစ်တယ် ၊ရံဖန် ရံခါရောက်လာကြတာက ဒါန သီလ ဘာဝနာဆိုတဲ့တရားတွေ ရောက်လာကြတယ်၊ အဲဒီတော့ ဒါနသီလ ဘာဝနာတရားတွေက ဧည့်သည်ဖြစ်တယ်၊ ဧည့်သည်နဲ့ အိမ်ရှင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ရှင်ကအမြဲတမ်းနေရာယူထားတော့ ဧည့်သည်ကတစ်ခါတစ်လေပဲဖြစ်တယ်နော်၊ အဲဒီတော့ ဧည့်သည်က တခါတစ်လေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ အိမ်ရှင်အပေါ်မှာ သြဇာညောင်းမလဲ ၊ဒါ့ကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်း၊ လူရဲ့ အဇ္ဈတ္တအတွင်းမှာကျန်နေခဲ့တာက အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်တွေဖြစ်တယ် အဲဒီတော့ ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကပဲ ဖြစ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့ ကဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက် ဒီလောဘ ဒေါသ မောဟဆိုတဲ့ တရားတွေကို အကုသိုိလ်တရားတွေကို ဖုံးလို့ရတော့မလဲ ”
လို့ ကုစားလို့မရနိုင်တဲ့ အပြစ်အကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ ညွှန်ကြားပြသနေပါတယ် ။ ယင်းအဓမ္မ၀ါဒသာလူတွေကြားပျံ့နှံ့သွားပါက အကုသိုလ်ဆိုတာ ပင်ကိုယ်သဘာဝ အရှိတရား အပြစ်တရားမျှသာဖြစ်တယ် ကုစားမရတာကို ဒါနသီလဘာဝနာနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်တယ်ဆိုတာလည်း အလကားပါပဲလို့ လက်ခံကျင့်သုံးလာကြရင် အမှန်တကယ် သူတော်ကောင်းတရားများ ပျက်စီးကာ တရားဥပဒေမဲ့ဖြစ်လာကြဖို့ပဲရှိပါတော့တယ် ။
“လူကနေပြီးတော့ ကြိုးစားကြည့်ကြတယ် ၊ကျင့်ကြံကြည့်ကြတယ် ၊အားထုတ်ကြည့်ကြတယ် ၊လူရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေက ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကို လူကဖိပြီးကြိုးစားကြတာ မကြိုးစားတဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး ”
“အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဖြစ်တဲ့ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း (၈၄၀၀၀)တရားတော်ကို သေချာဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်တော့လဲ အင်မတန်မှ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ် ၊ကောင်းတယ် ၊ဗုဒ္ဓကလည်း လာလှည့် ၊ရှုလှည့် ကျင့်ကြံအားထုတ်လှည့်၊
အင်မတန်မှ ကောင်းတဲ့တရားတော်တွေဖြစ်ပေမယ့်လို့ ဒီတရားတော်တွေကို ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်ရင်း ဒို့ဗမာစကားပုံတစ်ခုရှိသလိုပဲ ငှက်တွေက ပျံရင်းသေတယ် ၊လူမှန်လျှင် ကြံရင်းသေတယ်၊လူတွေက ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်ရင်း သေကြမယ်လို့ပြောကြတယ် ၊ ဟုတ်ပြီ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်း လူတွေ တကယ်လို့သေသွားတော့ရော ဒီနေ့ လူရဲ့အဇ္ဈတ္တ အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လောဘတရားကို မပယ်သတ်နိုင်တဲ့အတွက် အကုသိုလ်ကရှိတယ်၊”လို့ အကုသိုလ်တရားဟာ အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အိမ်ရှင်စိတ်ဖြစ်နေလို့ပယ်သတ်မရနိုင်ပါဘူး” …..လို့ဆိုကာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဟောပြောပြသချက်များသည် အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးသာဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုပင် ကျင့်ကြံကြိုးစား အားထုတ်ကြပေသည့် သေခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားတစ်မျိုးသာရရှိခံစားကြရကြောင်း သေခြင်းနဲ့သာအဆုံးသတ်ကြရကြောင်း “နတ္ထိ ကမ္မာနံ ဖလံ ၀ိပါကော ”ဆိုတဲ့တိတ္ထိတို့အယူအဆအတိုင်း ဒါန အကျိုး သီလအကျိုး ဘာဝနာအကျိုး တစ်စုံတစ်ရာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့ မိစ္ဆာဝါဒတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ ။
“လောဘကြောင့် ဒေါသတွေထွက်လာတယ် ၊လောဘနှင့် ဒေါသယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ မောဟဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်လာတယ်၊လူမှာ အကုသိုလ်စိတ် ၁၂-ပါးလုံးကယှဉ်သွားရော ၊အဲဒီတော့ ဒီအကုသိုလ်စိတ် ၁၂-ပါးလုံးက ယှဉ်ပြီဆိုမှတော့ လူရဲ့အသက်တာမှာ ဘယ်မှာလာပြီးတော့ ကုသိုလ်တရားကို ပွားများလို့ ရတော့မလဲ” …လို့ဆိုနေပြန်ပါတယ် ။မျက်ကန်းက နေထွက်တာမမြင်ရတော့ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့ ညပါ ညကပါလို့ စုံကန်ငြင်းနေသလိုပါပဲ ….သူတော်စဉ်သူတော်ကောင်းတွေက လေရှူသွင်းတာ လေရှုထုတ်တာကအစ မြင်မြင်သမျှ ကြားကြားသမျှ ကုသိုလ်ရအောင် အကုသိုလ်တွေဝင်လာခွင့်မရအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြချိန်မှာ ကုသိုလ်တရားတစ်ပြားသားမျှ မရှိရှာတဲ့ သဒ္ဓါနုံ့နည်း ပညာမွဲသူလူ့ဗာလခမျာမှာ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုလုပ်ရုံမျှမက ယင်း၏ အယူဝါဒကို အင်တာနက် ခရစ်ယာန်မီဒီယာများမှနေ၍ ကိုသိုလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှာလဲလို့ ထအောင်နေပြန်တာပါ ။သနားဖွယ်ကောင်းလေစွလို့ သာ နှလုံးသွင်းမိလိုက်ပါရဲ့။
“ကောင်းတဲ့ထဲကို မကောင်းတာတွေသွန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီတော့ ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရောသွားတယ် ၊ ရေနောက်ချောင်းထဲမှာ ရေကြည်တွေဝင်လာဝင်လာ ၊ ရေကြည်ချောင်းထဲမှာ ရေနောက်တွေပဲ ၀င်ဝင်ဒီအရာတွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ရေကနောက်သွားသကဲ့သို့ ကုသိုလ်တရားထဲမှာပဲ အကုသိုလ်ရောရော အကုသိုလ်တရားရှိနေတဲ့ ထဲမှာကုသိုလ်တွေကြိုးစားပြီး ဖြည့်ကျင့်ပေမယ်လို့ မစင်ခွက်ထဲမှာ နွားနို့ထည့်သလိုဖြစ်လာပြီ ဒါ့ကြောင့် လူရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား မရနိုင်ဘူး “ဆိုတာကြားလိုက်ရတော့ ဒီလူ Terrorism တစ်ယောက်ဆိုတာကို ချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ် ။ ဒါဆိုမကောင်းမှုတွေရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့ လူတွေအားလုံး ကောင်းမှုတွေလုပ်လည်းရှိပြီးသားအကုသိုလ်အပြစ်တွေကြောင့် ကုသိုလ်ကလည်း အကုသိုလ်ပြောင်းသွားလို့ အကုသိုလ်ပါပဲ လုပ်သမျှ အပြစ်ကြီးပဲလို့ ဆိုထားတာပါ ။ ဒါဆို လောကတစ်ခုလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့ ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ လူကောင်းသူကောင်းဆိုိတာမရှိတော့တာလား အကုန်လုံး ဆိုးယုတ်တဲ့အကုသိုလ်အပြည့်နဲ့လားလို့ ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ယင်း Terrorism တစ်ယောက်ကို လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင် အဟုတ်အမှန်အနေနဲ့ပွဲထုတ်လာတဲ့မီဒီယာကိုလည်း ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်မိတယ်။ ယင်းဓမ္မဆရာဟောကြားတဲ့ လူအားလုံးဟာ အပြစ်ကိုယ်စီရှိနေကြသည်။ သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်နေလည်း ယုတ်မာညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ရောနှောသွားလို့ လူယုတ်မာများသာဖြစ်ကြသည် ဆိုတဲ့အယူအဆဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာရော တကယ်လက်ခံကျင့်သုံးနေကြပါသလား လို့လေ။
ယင်းဓမ္မဆရာပြောတဲ့ ရေကြည်ထဲရေနောက်ထည့်ထည့် ရေနောက်ထဲရေကြည်ဝင်ဝင် ရေနောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကို ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အင်္ဂုတ္တိုရ် တိကနိပါတ် လောဏကပလ္လသုတ်မှာ အတိအလင်းဟောကြားရှင်းလင်းတော်မူခဲ့ပါတယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာက တစ်မတ်ဖိုးအကုသိုိလ်လုပ်ရင် တစ်မတ်ဖိုးအတိကျခံရမှာပါဆိုတဲ့ တရားသေမူဝါဒကိုတောင် စွဲကိုင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး မိမိက ကုသိုလ်တရားကိုပွားများနိုင်သလောက်ပွားလေလေ ဖြူစင်မွန်မြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလေလေပဲလို့ယူဆဟောကြားခဲ့သည်ဟု သာ ဆိုပါရစေ။ ယင်း လောဏကပလ္လသုတ်ကို မှတ်သားနာယူကြည့်ကြပါဦး ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ……
၁ဝ၁။ ရဟန်းတို့ ''ဤသတ္တဝါသည် ကံကို ပြုသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ထို ကံ၏ အကျိုးကို ခံစားရ၏''ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆိုငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ဤဆိုတိုင်း ဖြစ်လတ်သော် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု မဖြစ်တော့ချေ၊ ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ပြုရန် အခွင့်မရှိတော့ချေ။
ရဟန်းတို့ ''ဤသတ္တဝါသည် ခံစားအပ်သော ကံကို ပြုသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ထို ကံ၏ အကျိုးကို ခံစားရ၏''ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆိုငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ဤဆိုတိုင်း ဖြစ်လတ်သော် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု ဖြစ်နိုင်၏၊ ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ပြုရန် အခွင့်ရှိနိုင်၏။
ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ထိုပြုသူ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငရဲသို့ ဆောင်၏။
ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော ထိုသို့ သဘောရှိသည်သာလျှင်ဖြစ်သော မျက်မှောက်ဘဝ၌ ခံစားအပ်သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ဒုတိယဘဝ၌ အနည်းငယ်မျှသော အကျိုးလည်း မထင်၊ များစွာသော အကျိုးသည်ကား အဘယ် မှာ ထင်ပါအံ့နည်း။
ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့သော သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော အနည်းငယ်မျှဖြစ်သော မကောင်းမှုကံသည် ထိုပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ကို ငရဲသို့ ဆောင်သနည်း၊
ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကာယဘာဝနာကိုလည်း မပွါးများ၊ သီလကိုလည်း မပွါးများ၊ စိတ်ကိုလည်း မပွါးများ၊ ပညာကိုလည်း မပွါးများ၊ (ဂုဏ်အားဖြင့်) ငယ်၏၊ (ဂုဏ်ငယ်သောအားဖြင့်) ခန္ဓာကိုယ် ငယ်၏၊ (မကောင်းမှု) အနည်းငယ်ဖြင့် ဆင်းရဲစွာ နေရ၏။
ရဟန်းတို့ ဤသို့သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ် သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ထိုပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ကို ငရဲသို့ ဆောင်၏။
ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော ထိုသို့ သဘောရှိသည်သာလျှင် ဖြစ်သော မျက်မှောက်ဘဝ၌ ခံစားအပ်သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ဒုတိယဘဝ၌ အနည်းငယ်မျှသော အကျိုးလည်း မထင်၊ များစွာသော အကျိုးသည်ကား အဘယ်မှာ ထင်ပါအံ့နည်းဟူသည် အဘယ်နည်း၊
ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကာယဘာဝနာကိုလည်း ပွါးများ၏၊ သီလကိုလည်း ပွါးများ၏၊ စိတ်ကိုလည်း ပွါးများ၏၊ ပညာကိုလည်း ပွါးများ၏၊ (ဂုဏ်အားဖြင့်) မငယ်၊ (ဂုဏ်ကြီးသောအားဖြင့်) ခန္ဓာကိုယ် ကြီး၏၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ပြုတတ်သော ရာဂ စသည်တို့ မရှိသဖြင့် နေရ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော ထိုသို့ သဘောရှိသည်သာလျှင်ဖြစ်သော မျက်မှောက်ဘဝ၌ ခံစားအပ်သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ဒုတိယဘဝ၌ အနည်းငယ်မျှသော အကျိုးလည်း မထင်၊ များစွာသော အကျိုးသည်ကား အဘယ် မှာ ထင်ပါတော့အံ့နည်း။
ရဟန်းတို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် ဆားခွက်ကို ရေနည်းသော ခွက်၌ ထည့်ငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ထို အရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကုန်သနည်း၊ အနည်းငယ်သော ထို ရေသည် ဤမည်သော ဆားခွက် ဖြင့်မသောက်နိုင်သော ဆားငန်ရေ ဖြစ်ရာအံ့လောဟု (မေးတော်မူ၏)၊ မသောက်နိုင်သော ဆားငန်ရေ ဖြစ်ပါသည် အသျှင်ဘုရား။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ- အသျှင်ဘုရား ရေခွက်၌ ရေအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ထို အနည်းငယ်သော ရေသည် ဤမည်သော ဆားခွက်ဖြင့် မသောက်နိုင် သော ဆားငန်ရေ ဖြစ်ရာပါ၏ဟု (လျှောက်ကုန်၏)။
ရဟန်းတို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် ဆားခွက်ကို ဂင်္ဂါမြစ်၌ ထည့်ငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ထို အရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကုန်သနည်း၊ ထို ဂင်္ဂါမြစ်သည် ဤမည်သော ဆားခွက်ဖြင့် မသောက်နိုင်သော ဆားငန်ရေဖြစ်ရာအံ့လောဟု (မေးတော်မူ၏)။ မဖြစ်နိုင်ပါ အသျှင်ဘုရား၊ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ- အသျှင်ဘုရား ဂင်္ဂါမြစ်၌ ရေထုများပြားသောကြောင့် ထို များသော ရေထုသည် ဤမည်သော ဆားခွက်ဖြင့် မသောက်နိုင်သော ဆားငန်ရေ မဖြစ်နိုင်ပါဟု (လျှောက်ကုန်၏)။
ရဟန်းတို့ ဆိတ်ပိုင်ရှင်သည်လည်းကောင်း၊ ဆိတ်သတ်သမားသည်လည်းကောင်း၊ အရှင်မပေးဘဲ ဆိတ်ကို ခိုးယူသော အဘယ်သို့သဘောရှိသောသူကို သတ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ (ဥစ္စာကို) ဆုံးရှုံးစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအားလျော်စွာ ပြုရန်သော်လည်းကောင်း မတတ်စွမ်းနိုင်သနည်း။ ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ကြွယ်ဝ၏၊ များသော ဥစ္စာရှိ၏၊ များသော အသုံးအဆောင်ရှိ၏။ မင်းသော်လည်း ဖြစ်၏၊ အမတ်ကြီးသော်လည်း ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ဆိတ်ပိုင်ရှင်သည်လည်းကောင်း၊ ဆိတ်သတ်သမားသည်လည်းကောင်း၊ အရှင်မပေးဘဲ ဆိတ်ကို ခိုးယူသော ဤသို့သဘောရှိသောသူကို သတ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ (ဥစ္စာကို) ဆုံးရှုံးစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအားလျော်စွာ ပြုရန်သော်လည်းကောင်း မတတ် စွမ်းနိုင်။ စင်စစ်သော်ကား လက်အုပ်ချီလျက် ''အသျှင် ဆိတ်ကို ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်၏ တန်ဖိုးကိုဖြစ်စေ အကျွန်ုပ်အား ပေးသနားပါ''ဟု ထိုသူကို တောင်းပန်ရ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော ထိုသို့သဘောရှိသည်သာလျှင်ဖြစ်သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ထိုပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ကို ငရဲသို့ ဆောင်၏။ ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုအပ်သော ထိုသို့ သဘောရှိသည်သာလျှင်ဖြစ်သော မျက်မှောက်ဘဝ၌ ခံစားအပ်သော အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကံသည် ဒုတိယဘဝ၌ အနည်းငယ်မျှသော အကျိုးလည်း မထင်၊ များစွာသော အကျိုးသည် ကား အဘယ်မှာ ထင်ပါတော့အံ့နည်း။
ရဟန်းတို့ ''ဤသတ္တဝါသည် ကံကို ပြုသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ထို ကံ၏ အကျိုးကို ခံစား ရ၏''ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆိုငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ဤဆိုတိုင်း ဖြစ်လတ်သော် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု မဖြစ်တော့ချေ၊ ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ပြုရန် အခွင့်မရှိတော့ချေ။ ရဟန်းတို့ ''ဤသတ္တဝါသည် ခံစားအပ်သော ကံကို ပြုသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ထို ကံ၏ အကျိုးကို ခံစားရ၏''ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆိုငြားအံ့။ ရဟန်းတို့ ဤဆိုတိုင်း ဖြစ်လတ်သော် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု ဖြစ်နိုင်၏၊ ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ပြုရန် အခွင့်ရှိနိုင်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
“အဲဒီတော့ ဒီနေ့တို့တစ်ယောက်ဆီတိုင်း အသက်တာမှာ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ကြိုးစားအားထုတ်ကျင့်ကြံပြိးတော့ မကောင်းတာတွေကိုပယ်မယ်လို့ တို့တစ်ယောက်ဆီတိုင်း အဇ္ဈတ္တသန္တာန်လေးထဲမှာ အတွေးတွေရှည်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားပေးကြတယ် သွန်သင်ကြတယ်၊ သို့သော်လည်း ဒီအရာလေးတွေက လူ့အတွေးအခေါ်အမှန်တရားနှင့်ကြည့်တော့ မှန်ကန်ကောင်း မှန်ကန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ်လို့ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ လူ့ရဲ့အထင်သည် မှန်ကန်သောလမ်းတစ်မျိုးသည်ရှိတယ်၊ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံးတော့ သေခြင်းဆိုတဲ့လမ်းပဲတဲ့ “
ဒါကတော့ မိမိတို့ ဗုဒ္ဓသာဝကများဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်ပြသသည့်အတိုင်း မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်းကြောင်းအတိုင်းမှန်ကန်စွာကျင့်သုံးပါက မသေရာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတယ် ၊ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို ဘာအကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမျှမရှိတဲ့ အကျင့်မှားအဖြစ်ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲနေခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ် ။ ယင်းသည် ဇာတိပစ္စယာ ဇရာမရဏသောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခဒေါမနဿုပါယာသာ သမ္ဘ၀န္တိလို့ ပဋိစ္စသမုပ္ပ့ါဒ်ဒေသနာတော်ကို သေချာကျန လေ့လာခွင့်မရလေတော့ သေဆုံးပျက်စိးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှန်ကိုနားမလည်ရှာလို့ ပြောနေတာသာဖြစ်ပါတယ် တကယ်က ဇာတိရှိရင် မရဏဆိုတာရှိမှာပါ ၊အရာအားလုံးဟာ ဖြစ်ပြီး ပျက်နေကြတဲ့အနိစ္စတရားသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါက သေချင်းဟာ အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်လို့ အယူမှားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
“လူပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ရောက်ကြရ၏ ၊လူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့် ဧကံသေရ၏ ၊ ချဉ်သောစပျစ်သီးကိုစားသောသူတိုင်း သွားကျိန်းခြင်းဒဏ်ကို ခံရ၏ ဒါက ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါဌ်တော်မှာရှိတယ် ပရိတ်သတ် “လို့ သမ္မာကျမ်းစာလာ ဥပမာတစ်ခုကိုထုတ်ပြလာပါတယ် ၊ ယင်းအဆိုကို အကျွန်ုပ်မငြင်းပယ်ပါဘူး အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စပျစ်သီးချဉ်စားရင် သွားကျိန်းတာ ကလေးပင်သိမဟုတ်ပါလား ။သို့သော် လူအပေါင်းဟာ အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရသည်ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အပြစ်မျိုးပါနည်း ဥပမာနှင့်ဥပမေယျကား အလှမ်းဝေးလှသည်ဟု ထင်မိ၏ ။ဆက်လက်နားထောင်ကြည့်ကြဦးစို့-
“နောက်ထပ်နှုတ်ကပါဌ်တော်တစ်ချက်က ကျွန်ုပ်သည် မွေးစကပင် အပြစ်ပါလျှက်ရှိ၏ ၊အမိဝမ်းတွင်း၌ ပဋိသန္ဓေစဲစဉ်ကပင် အပြစ်စွဲလျှက်ရှိပါ၏။ ”
“မိခင်ဝမ်းထဲမှာ ပဋိသန္ဓေစွဲပြီး ဖြစ်နေတုန်းကလည်း အပြစ်ဆိုတာဆြွဲီပီးသား ၊ဘာပါလာလဲဆိုတော့ ဥပမာဆိုကြပါစို့ ဖခင်လုပ်တဲ့လူကလည်း AIDS ဆိုတဲ့ရောဂါရှိနေသလို၊ မိခင်ကလည်း HIV ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မွေးလာတဲ့သားသမီးက ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ဒီရောဂါပါလာသကဲ့သို့ ၊
ယနေ့ ဖခင်နဲ့မိခင်မှာ လောဘဒေါသမောဟဆိုိတဲ့တရားတွေက ရှိနေတဲ့အခါကာလ သမယရောက်တော့ မွေးလာတဲ့သားသမီးမှာလည်း အဲဒီအကုသိုလ်အညစ်ကြေးဆိုတဲ့တရားတွေကပါလာမယ် ဒါဓမ္မတာပါပဲ ပရိတ်သတ် လိုက်လျောက်ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပါ ”
“ကြည့်လိုက် လူတော့ဖြစ်လာပြီ တစ်ချို့က ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ ချို့ယွင်းကြတယ် တချို့လူတွေရောက်တော့ ညာဏ်ရည်မပြည့်စုံကြဘူး ၊တချို့က စားဝတ်နေရေးမပြေလည်လို့ ဒုက္ခသုက္ခတွေကြားထဲမှာ ရပ်ပြစ်(၈)ပါးထဲရောက်နေကြတယ် “လုပ်ချလာပြန်ပါပြီ မိဘတွေရဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကို သားသမီးတွေက အမွေဆက်ခံကာ ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရပါတယ်တဲ့ ဒါဟာ လောကအရရော ဓမ္မအရပါ လုံးဝမှားယွင်းတဲ့အယူအဆပါ ၊ သေဆုံးပြီးဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူသတ်မှု ဓားပြမှုအတွက် သားဖြစ်သူအား သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်များအား ထောင်အသွင်းအကျဉ်းချသည်ဟုဆိုလျှင် ယင်းဥပဒေသည် မှန်ကန်တိကျ မျှတသည့်တရားဥပဒေတရပ်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။ လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိုးမဟုတ်ပါလား တစ်မိထဲဖွားတဲ့အမွှာပူးနှစ်ယောက်တောင်မှ အကြိုက်ခြင်းတူကြတာမှမဟုတ်တာပဲ ။ လောကဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်း နန္ဒိယကျောင်းတကာ၏ဇနီးသယ် ရေ၀တီနှင့် သိကြားမောင်မာဃ လူ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်က ဇနီးသယ် သူဇာတို့ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်သိသာလှပါတယ် မိမိတို့ရရှိခံစားကြရသော ကောင်းးကျိုးမကောင်းကျိုးသည် မိဘများ၏ အကုသိုလ်တရားများနှင့်မဆိုင်ပဲ မိမိ၏အတိတ်က ဆိုးကံကောင်းကံများ နှင့်သာတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပေသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွင်းမှာပင် နားမလည်သူတို့က မှားယွင်းစွာယူဆပြောဆိုမှုအချို့ကိုလည်း ကြားဖူးကြမည်ဖြစ်၏ ။
” မိခင်ဝမ်းတွင်းထဲက ဆွံ့အ နားပင်း အကန်းလေးအဖြစ်မွေးလာရင် မိခင်၏ အကုသိုလ် ၊မွေးတုန်းကအကောင်းလေး နောက်မှကျိုးခြင်း ကန်းခြင်းသည် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အကုသိုလ်သာဖြစ်သည်” ဟူသတည်း ။
အမှန်တကယ်မှာ မိမိ၏ ရုပ်လှရခြင်း မလှရခြင်း ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသာခြင်းတို့သည် ကံပစ်ချသည့်အလျောက် အပင်ပေါက်ရသည်သာတည်း ။ နန်းတွင်းထဲမှာပင် အတူတူတစ်ချိန်ထဲဖွားခဲ့ကြပေမယ့် တစ်ယောက်က ရှင်ဘုရင့်သားဖြစ်ပြိး ရွှေလင်ပန်းနှင့် အချင်းဆေးကာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရပေ၏ ၊တစ်ယောက်ကား ဆင်ထိန်း အထိန်းတော်၏သားဖြစ်လျှင် တစ်နန်းတွင်းထဲမှာမွေးခဲ့ငြားသော်လည်း မည်သူမှ အရေတယူ ဂရုထားစောင့်ရှောက်ကြမည်မဟုတ်ပေ ၊
ဆိုလိုသည်မှာ မိခင်ဝမ်းထဲကပဲ ကန်းလာလာ အပြင်မှပဲ အကန်းဖြစ်ဖြစ် ဆိုးညစ်မှုဟူသမျှသည် အကုသိုလ်၏အကျိုးသာတည်း မည်သူကမျှ ဖန်ဆင်း၍ ထည့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပေ၊ သို့သော် အကန်းလေးမွေးလာပါက မိခင်မှာ မွေးကတည်းကစိတ်ချမ်းသာရမည်မဟုတ်သည်ကား သေချာ၏ ၊ယင်းမှာ မိခင်ကိုယ်တိုင်က အကုသိုလ်ကြီးလွန်းလှ၍ လူစင်မမှီသော ကလေးငယ်ကိုသာ သားတော်ရခြင်းပေတည်း ၊
ကံတူအကျိုးပေးဖြစ်ပေ၏ ၊ အရက်ဆိုင်မှာ အရက်ပုလင်းမျိုးစုံနှင့် ယဇ်ရာဇာတို့သာ ရောက်လာလည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ဘုရားကျောင်းကန်၌ကား ပေးကမ်းလှုဒါန်းသူ တရားကျင့်သူ သူတော်စင် သူတော်ကောင်းများသာ လေ့ကျက်ရာနေရာဖြစ်မည်မှာ ဓမ္မတာမဟုတ်ပါလား ၊ထို့ကြောင့် အကန်းလေးမွေးလာခြင်းသည် ယင်းမိခင်၏ အကုသိုလ်ကံကြောင့် လူစင်မမှီသူ ကလေးအား သားတော်ရခြင်းဖြစ်၏ ။ အကန်းကလေးဖြစ်ရခြင်းသည် ယင်းကလေးငယ်၏ အကုသိုလ်ကံကြောင့်သာဖြစ်၏ ။မိဘတို့ထံမှ အမွေရလိုက်သော မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံ၏ အကျိုးတရားကား လုံးဝမဟုတ်ပေ။ လူဖြူနှစ်ဦးက ပေါက်ဖွားလို့ လူဖြူကလေးဖြစ်ရပါသည် ဆိုရင်တောင်မှ ယင်းလူဖြူမိသားစုအတွင်း သွတ်သွင်းပေးလိုက်သောယင်းကလေးငယ်၏ ကံတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှ အမှန်တရားကိုသဘောပေါက်နိုင်ပေလိမ့်မည် ။ ယင်းအတူ AIDS ရောဂါမိသူ မိဘများကို အဖေ အမေတော်ရခြင်းကိုက မိမိကံတရားရဲ့စီမံချက်ချပေးလိုက်သည့်အတိုင်းသာတည်းဟု သာတင်ပြလိုက်ရပေ၏။
ယင်းကံတရားများနှင့် အကျိုးတရားတို့ကို သေချာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စေဖို့ စူဠကမ္မ၀ိဘင်္ဂသုတ်တော်ကိုပါ တခါတည်းရှာဖွေတင်ပြပေးလိုက်ပါသည် ။ http://sankooo.blogspot.com/2011/03/blog-post_04.html မှာလေ့လာကြည့်ပါ ၊
နောက်ပြိး ဓမ္မဆရာက ..” မနုဿတ္တဘာဝေ ဒုလ္လဘော- လူ့ဘ၀ဟာ အင်မတန် အင်မတန်မှရခဲ့တယ် ၊ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ဒုလ္လဘံ ၊စစ်မှန်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကို ကြားရခြင်းဟာ ပို၍ ပို၍ခက်ခဲတယ်”လို့ ဟောကြားနေတာတွေ့ရပါတယ် ။ ယင်းကဲ့သို့ ရေရှုခရစ်တော်က မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘော ၊ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ဒုလ္ဘဘံ စသည်ဖြင့် ပါဠိများနှင့်ဟောကြားခဲ့တာ သို့မဟုတ် ယင်းအဓိပ္ပါယ်ပါသော စကားများကိုပြောကြားခဲ့ပါသလား ဆိုတာ အရင်ဆုံးဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ၊ သို့မဟုတ်ပါက နှောင်းခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများနားဝယ် ခရစ်ယာန်မှာလည်း လူ့အဖြစ်ရခဲ့ကြောင်း ၊တရားတော်ကိုကြားနာရခဲ့ကြောင်း ဟောကြားထားချက်တွေရှိသဟ ဟုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါပဲ ၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ သူခိုးကလူလိုဟစ်ကာ မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက သမ္မာကျမ်းစာမှ တရားကောင်းနိုးရာရာများကို ခိုးယူထည့်သွင်းကာ ဘုရားဟောလုပ်ပစ်ကြကြောင်း ၀ါဒဖြန့်လာကြမှာလည်း စိုးမိလို့ထောက်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုက “တချို့က စားဝတ်နေရေးမပြေလည်လို့ ဒုက္ခသုက္ခတွေကြားထဲမှာ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲမှာရောက်နေကြတယ်”လို့ ဆိုထားပြန်ပါတယ် ၊ခရစ်ယာန်သမ္မာ ကျမ်းစာများမှာ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးအကြောင်းဖော်ပြထားတာ တစ်စွန်းတစ်စ ပါလို့များပြောနေလေသလား ။ သို့မဟုတ်ပါက ခရစ်ယာန်နာမည်ခံကာ မိမိတို့ဘုရားကိုလည်း စော်ကားမော်ကား ထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်သေးတယ် ဟောသမျှတရားကြည့်ပြန်တော့လည်း ဂေါတမတရားကြီးထဲလို့သာ ပြောရတော့မည့်ကိန်းဆိုက်နေပြန်ပါတယ် ။ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးဆိုတာကို အင်္ဂုတ္တိုရ် အဋ္ဌကနိပါတ် အက္ခဏသုတ်မှာတိုက်ရိုက်လာရှိပြိး ရှေးဆရာတော်ကြီးများကလည်းဆောင်ပုဒ် အလက်ာဖြင့် နားလည်လွယ်အောင် …” ငရဲလည်းပါ ပါယ်သုံးရွာနှင့် ဒီဃာယုနတ် ဖြစ်လတ်ပစ္စန် မိစ္ဆာညာဏ်ရှိ ညာဏ်မရှိငြား ညာဏ်ရှိငြားလည်း ဘုရားမဖြစ် ကျန်းဂန်လှစ်သည် ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးသရုပ်တည်း “ဟု စပ်ဆိုထားကြတာဖြစ်လို့ လူတိုင်းနီးပါး သိရှိပြိးသား အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ယင်းတရားတော်ကိုပင်လျှင် ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာမှာ ထည့်ဖတ်လာတာကတော့ တရားများရောထွေးကာ အမှန်အမှားခွဲခြားဖို့ခက်ကုန်မှာလည်းစိုးရပါတယ်။
၉ - အက္ခဏသုတ်
၂၉။ ရဟန်းတို့ ''လောကသည် ပြုအပ်သော အခွင့်ရှိ၏၊ လောကသည် ပြုအပ်သော အခွင့်ရှိ၏''ဟု အကြားအမြင်မရှိသော ပုထုဇဉ်သည် ပြောဆို၏၊ ထိုပုထုဇဉ်သည် အခွင့်ဟုတ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အခွင့်မဟုတ်သည်ကိုလည်းကောင်း သိကား မသိရှိလေ။ ရဟန်းတို့ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် အခွင့်အခါ မဟုတ်ခြင်းတို့သည် ဤရှစ်မျိုးတို့တည်း။
ရဟန်းတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော၊ (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော၊ အသိဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' အကျင့် 'စရဏ'နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော၊ လောကကို သိတော်မူသော၊ ဆုံးမထိုက်သူကို ဆုံးမတတ် သည့် အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသော၊ နတ်လူတို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော၊ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိတော်မူသော၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း လောက၌ ပွင့်ထွန်းတော်မူ၏၊ ကိလေသာမီးငြိမ်းခြင်းကို ရွက်ဆောင်တတ်သော၊ ကိလေသာငြိမ်းခြင်းကို ပြုတတ်သော၊ လေးပါးသော မဂ်ဉာဏ်သို့ ရောက်စေတတ်သော၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သာ အပြားအားဖြင့် သိစေအပ်သော (သစ္စာ လေးပါး) တရားကိုလည်း ဟောကြားတော်မူအပ်၏၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ငရဲဘုံ၌ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကား မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် ပဌမအခွင့်အခါ မဟုတ်ခြင်းတည်း။ (၁)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား။ပ။ နတ်လူတို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော၊ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိတော်မူသော၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် လောက၌ ပွင့်တော်မူ၏၊ ကိလေသာမီး ငြိမ်းခြင်းကို ရွက်ဆောင်တတ်သော၊ ကိလေသာငြိမ်းခြင်းကို ပြုတတ်သော၊ လေးပါးသော မဂ်ဉာဏ်သို့ ရောက်စေတတ်သော၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သာ အပြားအားဖြင့် သိစေအပ်သော (သစ္စာလေးပါး) တရားကို လည်း ဟောကြားတော်မူအပ်၏၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်၏။ပ။ (၂)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား။ပ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်၏။ပ။ (၃)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား။ပ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား တစ်ခုသော ရှည်သော အသက်ရှိသော (အသညသတ်) ဗြဟ္မာ့ဘုံ၌ ဖြစ်၏။ပ။ (၄)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား။ပ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား အစွန်အဖျားကျသော ဇနပုဒ်တို့၌ ဖြစ်ရ၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အလွန်အသိဉာဏ် နည်းပါးကုန်သော လူရိုင်းမျိုးတို့၌ ဖြစ်ရ၏၊ ယင်းအရပ်တို့၌ ရဟန်း ရဟန်းမိန်းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတို့၏ ဖြစ်ခြင်းသည် မရှိ။ပ။ (၅)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား။ပ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား မဇ္ဈိမဒေသတို့၌ ဖြစ်၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် လည်း ''ပေးလှူအပ်သော အလှူ၏ အကျိုးသည် မရှိ၊ ယဇ်ကြီးပူဇော်မှုသည် မရှိ၊ ယဇ်ငယ်ပူဇော်မှု သည် မရှိ၊ ကောင်းမှု မကောင်းမှုတို့၏ အကျိုးဝိပါက်သည် မရှိ၊ ဤလောကသည် မရှိ၊ တစ်ပါးသော လောကသည် မရှိ၊ အမိသည် မရှိ၊ အဖသည် မရှိ၊ သေ၍တစ်ဖန်ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့သည် မရှိကုန်၊ ဤလောကကိုလည်းကောင်း၊ တမလွန်လောကကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် မျက်မှောက် ပြု၍ ဟောကြားနိုင်ကုန်သော အညီအညွတ်ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏတို့မည်သည် လောက၌ မရှိကုန်ဟု မှားသော အယူ(အမြင်)ရှိသူ ဖြစ်၏။ပ။ (၆)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား။ပ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား မဇ္ဈိမဒေသတို့၌ ဖြစ်၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် လည်း ပညာမရှိ၊ မိုက်မဲ၏၊ ဆွံ့အ၏၊ ကောင်းသော စကား, မကောင်းသော စကား၏ အနက်ကို သိရန် မစွမ်းနိုင်။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကား မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် သတ္တမအခွင့်အခါ မဟုတ်ခြင်းတည်း။ (၇)
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော၊ (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော။ပ။ နတ်လူတို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော၊ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိမြင် တော်မူသော၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် လောက၌ မပွင့်ပေါ်။ ကိလေသာမီးငြိမ်းခြင်းကို ရွက်ဆောင်တတ်သော၊ ကိလေသာငြိမ်းခြင်းကို ပြုတတ်သော၊ လေးပါးသော မဂ်ဉာဏ်သို့ ရောက်စေတတ်သော၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သာ အပြားအားဖြင့် သိစေအပ်သော (သစ္စာလေးပါး) တရားကိုလည်း မဟောကြားအပ်၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား မဇ္ဈိမဒေသတို့၌ ဖြစ်၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း ပညာရှိ၏၊ မမိုက်မဲ၊ မဆွံ့အ၊ ကောင်းသော စကား, မကောင်းသော စကား၏ အနက်ကို သိရန် စွမ်းနိုင်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကား မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် အဋ္ဌမ အခွင့်အခါ မဟုတ်ခြင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် အခွင့်အခါ မဟုတ်ခြင်းတို့သည် ဤရှစ်မျိုးတို့တည်း။ (၈)
ရဟန်းတို့ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် အခွင့်အခါသည်ကား တစ်ခုတည်းသာလျှင်တည်း၊ တစ်ခုတည်းသော အခွင့်အခါဟူသည် အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော၊ (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော၊ အသိဉာဏ် 'ဝိဇ္ဇာ' အကျင့် 'စရဏ'နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော၊ လောကကို သိတော်မူသော၊ ဆုံးမ ထိုက်သူကို ဆုံးမတတ်သည့် အတုမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသော၊ နတ်လူတို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော၊ သစ္စာ လေးပါးတရားကို သိမြင်တော်မူသော၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် လောက၌ ပွင့်တော်မူ၏။ ကိလေသာမီး ငြိမ်းခြင်းကို ရွက်ဆောင်တတ်သော၊ ကိလေသာငြိမ်းခြင်းကို ပြုတတ်သော၊ လေးပါးသော မဂ်ဉာဏ်သို့ ရောက်စေတတ်သော၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သာ အပြားအားဖြင့် သိစေအပ်သော (သစ္စာလေးပါး) တရားကိုလည်း ဟောကြားတော်မူအပ်၏၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း မဇ္ဈိမဒေသတို့၌ ဖြစ်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ပညာရှိ၏၊ မမိုက်မဲ၊ မဆွံ့အ၊ ကောင်းသော စကား, မကောင်းသောစကား၏ အနက်ကို သိရန် စွမ်းနိုင်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကား မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးရန် တစ်ခုတည်းသာလျှင် ဖြစ်သော အခွင့်အခါတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၁)
အကြင်သူတို့သည် လူ၏ အဖြစ်ကို ရကြကုန်လျက် ကောင်းစွာ အပြားအားဖြင့် သိစေအပ်သော သူတော်ကောင်းတရား၌ အခွင့်အခါကို မရကြကုန်၊ ထိုသူတို့သည် အခွင့်ကောင်းကို လွန်စေကုန်၏။ မဂ်၏ အန္တရာယ်ကို ပြုတတ်ကုန်သော များစွာသော အခွင့်မဟုတ်သည်တို့ကို ဟောတော်မူအပ်ကုန်၏၊ လောက၌ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် တစ်ရံတစ်ခါသာလျှင် ပွင့်ကုန်၏။ လောက၌ အကြင်ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ နဝမခဏကို အလွန်ရခဲ၏၊ ထိုဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ နဝမခဏသည် (မြတ်စွာဘုရား၏) မျက်မှောက်ဖြစ်၍ ဖြစ်၏၊ လူအဖြစ်ကို ရခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သူတော်ကောင်းတရားကို ဟောကြားခြင်းကိုလည်းကောင်း အလွန်ရခဲ၏။ ထိုဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ နဝမခဏ၌ မိမိအကျိုးစီးပွါးကို အလိုရှိသော သတ္တဝါသည် သူတော် ကောင်းတရားကို အဘယ်သို့လျှင် သိရအံ့နည်းဟု အားထုတ်ရန် သင့်၏၊ စင်စစ် အခွင့်ကောင်းကို မလွန်စေလင့်။ မှန်၏၊ ထိုဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ နဝမခဏကို လွန်စေသော သူတို့သည် ငရဲသို့ ရောက်ကြရကုန်၍ စိုးရိမ်ရကုန်၏။ အကြင်သူသည် ဤဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ နဝမခဏ၌ သူတော်ကောင်းတရား၏ နိယာမ သဘောဟု ဆိုအပ်သော ထိုအရိယာမဂ်ကို အကယ်၍ ချွတ်ယွင်းစေအံ့၊ ထိုသူသည် အကျိုးစီးပွါးကို လွန်စေသော ကုန်သည်ကဲ့သို့ ကြာမြင့်စွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး ပူပန်ရလိမ့်မည်။ သူတော်ကောင်းတရားကို ချွတ်ယွင်းစေသော အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့အပ်သော သတ္တဝါ သည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သေခြင်းတည်းဟူသော သံသရာ၌ ကြာမြင့်စွာ ခံစားရလိမ့် မည်။
အကြင်သူတို့သည်ကား လူ၏အဖြစ်ကို ရကြကုန်၍ ကောင်းစွာ အပြားအားဖြင့် သိစေအပ်သော သူတော်ကောင်းတရား၌ မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်ကို (ရှေးက လည်း) လိုက်နာကုန်ပြီ၊ (နောင်လည်း) လိုက်နာကုန်လိမ့်မည်၊ (ယခုလည်း) လိုက်နာဆဲ ဖြစ်ကုန်၏။ အကြင်သူတို့သည်လည်း မြတ်စွာဘုရားတို့သာ သိစေတော်မူအပ်သော၊ အတုမရှိ မြတ်သော အကျင့်ဟု ဆိုအပ်သော မဂ်ကို ကျင့်ကုန်၏။ ထိုသူအားလုံးတို့သည် လောက၌ ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ နဝမခဏကို ထိုးထွင်း၍ သိကုန်၏။ စက္ခုငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ နေမင်း၏ အဆွေတော်ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် အကြင်စောင့်စည်းမှု 'သံဝရ'တို့ကို ဟောတော်မူအပ်ကုန်၏။ ထိုစောင့်စည်းမှု 'သံဝရ'တို့၌ အခါခပ်သိမ်း လုံခြုံသည်ဖြစ်၍ သတိနှင့် ပြည့်စုံကာ (ကိလေသာမိုး) မစွတ်ဘဲ နေရာ၏။ လောက၌ အကြင်သူတို့သည် အာသဝေါတရားတို့၏ ကုန်ရာ (အရဟတ္တဖိုလ်) သို့ ရောက်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် စင်စစ်အားဖြင့် မာရ်မင်း၏ တည်ရာ သံသရာသို့ အစဉ် လျှောက်ကုန်သော အနုသယအားလုံးတို့ကို ဖြတ်တောက်၍ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ရောက်ကုန်၏။
နောက်ပြိး ဦးဇင်းတို့လေ့လာမှတ်သားဖူးခဲ့တာက ……..
မြတ်စွာဘုရားသည် နေ့စဉ် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးခြင်းကိစ္စ ပြီးဆုံးသည့်နောက် တစ်နေ့တာ ဆောင်ရွက်မြဲ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော်မူ၏။ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်အနီး အသင့်ခင်းထားသော နေရာတော်၌ ထိုင်တော်မူပြီးနောက် ခြေဆေးအင်းပျဉ်၌ ရပ်တော်မူလျက် ရဟန်းတော်များအား ဒုလ္လဘတရား ငါးပါးကို နေ့စဉ်ပင် ဟောကြားသတိပေးတော်မူမြဲဖြစ်သည်။
“အပ္ပမာဒေန ဘိက္ခ၀ သမ္ပာဒေထ = ရဟန်းတို့ မမေ့လျော့သော သတိတရားနှင့် ပြည့်စုံကြပစေ။
၁။ ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒေါ ဒုလ္လဘော လောကသ္မိံ= ရဟန်းတို့ - လောက၌ ဘုရားရှင် ပွင့်ထွန်းတော်မူခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ၏။
၂။ မနုဿတ္တိပဋိလာဘော ဒုလ္လဘော = လူအဖြစ်ရခြင်းသည် ခက်ခဲ၏။ (လူအဖြစ် ရခဲ၏)။
၃။ သဒ္ဓါသမ္ပတ္တိ ဒုလ္လဘာ = (ရတနာသုံးပါးနှင့်ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်မူ) သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် ခက်ခဲ၏။ (သဒ္ဓါနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကို ရခဲ၏)။
၄။ ပဗ္ဗဇ္ဇာ ဒုလ္လဘာ = ရဟန်းအဖြစ်ကို ရခဲ၏။
၅။ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ဒုလ္လဘံ = သူတော်ကောင်းတရား ကြားနာရဖို့ ခက်ခဲ၏”။
ဒုလ္လဘတရား ဟောကြား သတိပေးပြီးလျှင် ကမ္မဋ္ဌာန်း မေးလျှောက်သော ရဟန်းတို့အား သင့်လျော်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပေးတော်မူသည်။ ….
လို့ ယင်းဒုလ္လဘတရားငါးပါးမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ Daily Dhamma Talk သြ၀ါဒ တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားကြပါတယ် ။ ယ္ခုသော်ကား ယင်းဓမ္မဆရာမှ မျက်စဉ်းထဲသို့ အဆိပ်ရောကာ မျက်ကန်းများဖြစ်အောင် ကြံစည်အားထုတ်ကာ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ဒုလ္လဘံ-စစ်မှန်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကို ကြားရခြင်းဟာ ပို၍ပို၍ခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုလာပါသဖြင့် လုံးဝ ကန့်ကွက်တားမြစ်ဖို့လိုမယ်လို့ ထင်မိပါတယ် သို့မဟုတ်ပါက ဇာတ်ထဲကလူပျက်များလို တံခါးမရှိဓားမရှိ စည်းစောင့်ကလနားမရှိပဲ ထင်တ်ုင်းကြဲနေပေတော့မည်ဟု တွေးမိသောကြောင့်တည်း။
“လူတွေ ဘုရားဖူး ဘုရားဖူးနဲ့ ကြိုးစားပြိးသွားကြပေမဲ့ မိမိအသက်တာအတွက် ဧကံမုချ စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားနှင့် ၀မ်းမြောက်စွာပြန်လာရတဲ့အသက်တာမရှိပါဘူး၊ ..လောဘ ၊ဒေါသ ၊ မောဟ ၊မာန ၊ဒိဋ္ဌိ ၊၀ိစိကိစ္ဆာ ၊ ဣဿာ ၊ မစ္ဆရိယ ၊ထိန ၊ မိဒ္ဓ ၊ ကုက္ကုစ္စ ဆိုတဲ့ ကိလေသာ မီးဆယ့်တစ်ပါးက ဘုရားဖူးနေတုန်းလည်း လောင်ကျွမ်းနေတာပဲ ..”
ဆိုပြိး ဗုဒ္ဓဂယာ ရွှေတိဂုံစတဲ့ထင်ရှားသည့် ဘုရားပုထိုးတော်များ ဥဒ္ဒိဿစေတီ စတဲ့ စေတီလေးမျိုးတို့အား ကြည်ညိုဖူးမြော် ပူဖောနေမူကိုလည်း လူသိရှင်ကြား အမနာပပြောနေပြန်ပါတယ် ။ ယင်းကဲ့သို့ စေတီတော်တို့ကိုရှိခိုးဝတ်ပြုနေသူ သူတော်စင်တို့အား မကောင်းပြောလျှင် မည်သို့အကျိုးတရားများ ရရှိနိုင်ပုံကို ခုဒ္ဒကနိကာယ် ပေတ၀တ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်မှာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်နှုတ်ကာ သတိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။ ..
(ဓာတ်တော်ထားရာစေတီပုထိုးကို ပူဇော်သူတို့အား အပြစ်ပြောပြ၍ ထားမြစ်ခဲ့သောကြောင့် သေလွန်သောအခါ ရှစ်သောင်းခြောက်ထောင်မျှသော ဆွေမျိုးတို့နှင့်တကွ အပုပ်နံ့ လှိုင်သော ခံတွင်းပိုးလောက်တို့စားခြင်းကို ခံနေကြရသော ပြိတ္တာများ)
၅ဝ၇။ ကောင်းကင်၌ တည်နေသော သင်၏ (ကိုယ်၌) မကောင်းသော အပုပ်နံ့သည် လှိုင်၏၊ အပုပ်နံ့လှိုင်သော သင်၏ ခံတွင်းကိုလည်း ပိုးလောက်တို့သည် ခဲစားကုန်၏၊ သင်သည် ရှေးဘဝကအဘယ်ကံကို ပြုခဲ့သနည်း။
၅ဝ၈။ ထို့ထက်အလွန်မူကား (ကံနှိုးဆော်အပ်သောသူတို့က) လက်နက်ယူလျက် သင့်ကို အဖန်ဖန်လှီးဖြတ်ကုန်၏၊ ဆားငန်ရေဖြင့် လောင်းဆွတ်၍ အဖန်ဖန် လှီးဖြတ်ကုန်၏။
၅ဝ၉။ သင်သည် ကိုယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း အဘယ်မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့သပါနည်း၊ အဘယ်ကံ၏ အကျိုးကြောင့် ဤဆင်းရဲသို့ ရောက်ရပါသနည်းဟု (အသျှင်မဟာကဿပက မေး၏)။
၅၁ဝ။ အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် ပျော်မွေ့ဖွယ်ကောင်းသော နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ရှိသော တောင်တို့ဖြင့်ကာရံအပ်သော ရာဇဂြိုဟ်မြို့၌ အလွန်များသော ဥစ္စာစပါးကို အစိုးရသူ ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။
၅၁၁။ ထိုအကျွန်ုပ်၏ (ရှေးဘဝက) ဤမယားသည်လည်းကောင်း၊ ဤသမီးသည်လည်း ကောင်း၊ ဤချွေးမသည်လည်းကောင်း ထိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ပန်းကိုလည်းကောင်း၊ ကြာ ကိုလည်းကောင်း၊ အသစ်ဖြစ်သော နံ့သာပျောင်းကိုလည်းကောင်း ပုထိုးသို့ (ပူဇော်ရန်) ဆောင်ယူသည်တို့ကို တားမြစ်မိခဲ့ပါ၏၊ အကျွန်ုပ်သည် ထိုမကောင်းမှုကံကို ပြုခဲ့ပါ၏။
၅၁၂။ (အရှင်ဘုရား) အသီးအသီး ခံစားအပ်သော ဆင်းရဲသော ဝေဒနာရှိကုန်သော ရှစ်သောင်းခြောက်ထောင် အတိုင်းအရှည်ရှိကုန်သော အကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတ်တော်ထားရာ ပုထိုးကို ပူဇော်ခြင်းကို ကဲ့ရဲ့မိကြကုန်၍ ပြင်းစွာ ဆင်းရဲသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် ငရဲနှင့်တူသော ပြိတ္တာဘုံ၌ပြင်းထန်စွာ ခံနေရပါကုန်၏။
၅၁၃။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၏ ဓာတ်တော်ထားရာ ပုထိုးကို (ရည်မှတ်၍) ပူဇော်ခြင်းငှါ ပွဲလမ်းသဘင် ဖြစ်သည်ရှိသော် (အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော) အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဓာတ်တော်ထားရာ ပုထိုးကို ပူဇော်ခြင်း၌ အပြစ်ဒေါသကို ပြကုန်၏၊ ထို ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ထိုမကောင်းမှုမှရှောင်ကြဉ်ကြပါစေကုန်လော့။
၅၁၄။ နတ်ပန်းတို့ကို ပန်ဆင်ကုန်၍ နတ်ဝတ်တန်ဆာဝတ်ဆင်ကြကာ ပုထိုး၌ ပန်း ပူဇော်သော ကံ၏အကျိုးကို ခံစားကြကုန်လျက် လာကြကုန်သော ဤနတ်သမီးတို့ကို ကြည့်ရှု တော်မူပါလော့၊ ထိုနတ်သမီးတို့သည် များသော အခြံအရံ အကျော်အစောရှိကုန်လျက် နတ် စည်းစိမ်နှင့် ပြည့်စုံကြပါကုန်၏။
၅၁၅။ ပညာရှိကုန်သော အကျွန်ုပ်၏ မယား, သမီး, ချွေးမတို့သည် အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သော မဖြစ်ဖူးမြဲဖြစ်သော ကြက်သီးမွေးညှင်းထဖွယ် ဖြစ်သော ထိုအကျိုးထူးကို မြင်ကြကုန်သောကြောင့် ရှိခိုးခြင်းကို ပြုခဲ့ပါကုန်၏၊ ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ ဓာတ်တော်ထားရာ ပုထိုးကို ရှိခိုးခဲ့ကြ ပါကုန်၏။
၅၁၆။ ထိုအကျွန်ုပ်သည် စင်စစ် ဤပြိတ္တာဘုံမှ လွတ်သွား၍ လူအမျိုးဇာတ်ကို ရသည်ရှိ သော် ပုထိုးအားပူဇော်ခြင်းကို မမေ့မလျော့မူ၍ အဖန်ဖန် ပြုပါတော့အံ့ဟု ကြံစည်အောက် မေ့မိပါ၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဆယ်ခုမြောက်သော ဓာတုဝိဝဏ္ဏပေတဝတ္ထု ပြီး၏။
သတ္တ၀ါတို့ကို လောာင်ကျွမ်းပျက်စီး ဆင်းရဲစေတတ်သော တရား (၁၁) ပါး ဆိုသည်မှာ
(၁) ရာဂမီး (လောဘမီး) - တပ်နှစ်သက်ရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၂) ဒေါသမီး - အမျက်ထွက်၊ စိတ်ဆိုးရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၃) မောဟမီး - အဟုတ်အမှန်ကို မမြင်မသိရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၄) ဇာတိမီး - ပဋိသန္ဓေနေရမှု၊ ဘ၀အသစ်၌ ဖြစ်ရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၅) ဇရာမီး - အိုမင်းရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၆) မရဏမီး - သေပျက်ရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၇) သောကမီး - စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၉) ဒုက္ခမီး - ဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့် မသာယာသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၁၀) ဒေါမနဿမီး - စိတ်ကိုမှီ၍ မသာယာသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
(၁၁) ဥပါယာသမီး - ပြင်းစွာပူပန်မှု၊ ဆို့တက်မေ့မြောသွားမှုများ ဖြစ်သဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
တို့ဖြစ်ပြီး အဖန်ဖန်ညစ်နွမ်းစေတတ်တဲ့ ကိလေသာကား အကျဉ်းအားဖြင့် (၁၀)ပါးမျှသာရှိပါသည် ယင်းတို့မှာ
(၁၀) အနောတ္တပ္ပ တို့တည်း သို့ဖြစ်၍ ကိလေသာဆယ်ပါးတို့တွင်လည်း ယင်းဓမ္မဆရာရွတ်ဆိုသွားသော ဣဿာ ၊ မစ္ဆရိယ ၊ကုက္ကုစ္စတို့မပါဝင်ပေ ၊ မီးဆယ့်တစ်တန်နှင့် ကိလေသာတို့သည်လည်း သီခြားစီသာဖြစ်ပါသဖြင့် ရာသီမပိုင်ဆေးမကိုင်နှင့်ဆိုတာလို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို အပါးဝစွာ နားလည်ကြေညက်အောင် မလေ့လာမစည်းပူးပဲ ".လောဘ ၊ဒေါသ ၊ မောဟ ၊မာန ၊ဒိဋ္ဌိ ၊၀ိစိကိစ္ဆာ ၊ ဣဿာ ၊ မစ္ဆရိယ ၊ထိန ၊ မိဒ္ဓ ၊ ကုက္ကုစ္စ ဆိုတဲ့ ကိလေသာ မီးဆယ့်တစ်ပါးက ဘုရားဖူးနေတုန်းလည်း လောင်ကျွမ်းနေတာပဲ ..”လို့ ရစ်ယာန်များကိုလည်း သွားသင်မပေးလိုက်ပါနှင့် ဖွတ်မရဓားမဆုံး ခရစ်ယာန်များရော ဗုဒ္ဓ၀ါဒီများပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး အရှုံးထွက်မည်ကို ဆိုးသောကြောင့်ပါဟု တင်ပြရင်း ယင်းဓမ္မဆရာ၏ ဟောပြောချက်အပေါ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်းအား ဤမှာပဲ ရပ်နားပါရစေ ။
ယင်းဓမ္မဆရာ၏ ဖိုင်ကို နားထောင်ကြည့်ရန် ဤလင့်မှသွားပါ - http://www.youtube.com/watch?v=NQbm6gVMq_8&list=UUtcxeCFiTcZsZa3rZJSOh_g&index=2&feature=plcp
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:01 PM , Links to this post ,0comments
Labels: S. Gum Aung, လင်္ကာအရှင်
ဤဘလော့ဂ်ကို ၃၁ ရက် ၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မနက်ခင်းတွင် စတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစတင်သည့်အချိန်မှ စပြီး လက်လှမ်းမီရာ နေ့ စဉ် ရေးသမျှ ဓမ္မပို့ စ်များကို ကြိုးစားပြီး တင်သွားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
အကယ်၍ ဘလော့ဂ်နှင့်ပတ်သတ်၍ အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ သတင်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါလျင် vimuttisukha@gmail.com, thitsaralin@gmail.com နှင့် 2010pyaesoneaung@gmail.com တို့ သို့အီးမေးလ်ပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ခင်ဗျား။
ဘလော့ဂ်စာရင်းတွင် မပါဝင်သေးသည့် ဓမ္မဘလော့ဂ်ဂါများအားလည်း ကျွန်တော်တို့ နှင့် လက်တွဲရင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော် စည်ပင်ထွန်းကားရေးအတွက် အတူတကွ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
မေတ္တာ ၊ ဓမ္မ သာသနာ့အလင်းရောင်တို့၏ အေးမြသောဆွဲငင်အာ...
► 2009 (3381)